March 2018 | Language Century Language Century
ချာပါတီ၊ ပူရီ - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
10:59 PM C-Word , Chinese
အိန္ဒိယ အစားအစာတွေကတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ နာမည်ကြီးသလို တော်တော်များများလည်း စားဖူးကြမှာပါ။
ဒီအစားအစာတွေကို တရုတ်လို အသံထွက်တဲ့အခါမှာတော့ မူရင်းအခေါ်အဝေါ်အတိုင်းပဲ အသံဖလှယ်ပြီး ခေါ်ပါတယ်။
恰巴堤 qià bā dī
ချာ့ပါးတီး - ချာပါတီ Chapati
卡巴 kǎ bā
ခါပါး - ကဗတ် Kabah
皮欧哩 pí ōu li
ဖျီအိုးလီ - ပူရီ Puri
鲁堤 lǔ dī
လူတီး - ရိုတီ Roti
多沙 duō shā
တောရှားh - တိုရှည် Dosa
靠非 kào fēi
ခေါက်ဖေးf - ကူလ်ဖီး Kulfi
ခြာပါတီ၊ ပူရီ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
အိန်ဒိယ အစားအစာတှကေတော့ ကမ်ဘာအရပျရပျမှာ နာမညျကွီးသလို တျောတျောမြားမြားလညျး စားဖူးကွမှာပါ။
ဒီအစားအစာတှကေို တရုတျလို အသံထှကျတဲ့အခါမှာတော့ မူရငျးအချေါအဝျေါအတိုငျးပဲ အသံဖလှယျပွီး ချေါပါတယျ။
ခြာ့ပါးတီး - ခြာပါတီ Chapati
ခါပါး - ကဗတျ Kabah
ဖြီအိုးလီ - ပူရီ Puri
လူတီး - ရိုတီ Roti
တောရှားh - တိုရှညျ Dosa
ခေါကျဖေးf - ကူလျဖီး Kulfi
လင်ဝတ္တရား ငါးပါး - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
7:49 PM C-Text , Chinese
မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ အတုယူစရာကောင်းတဲ့ လောကနီတိတွေ ရှိကြပါတယ်။ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ဘဝများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
zuò zhàngfu de wǔ xiàng shǒuzé
ဇော့z ကျန့်h(င်)ဖူးfတဲ့ ဝူရှန့်(င်)ရှိုhဇဲယ်z
jiǎng huà tàidù hé ǎi
ကျန်(င်)ဟွာ့ ထိုက်တု ဟဲယ်းအိုင်
shōurù quánbù jiāo chū
ရှိုးhရုr ချွမ်ပု ကျောင်းချူးh
ရှာဖွေရရှိလာသော ဥစ္စာဓနတို့ကို အပ်နှင်းခြင်း
bù yú qítā fùnǚ sītōng
ပုယွီ ချီထား ဖုfနွီ စီးထုန်း(င်)
wèi qīzi gòuzhì fúshì
ဝေ့ချီးဇစ်z ကို့ကျိh ဖူfရှစ်h
အဝတ်အစား၊ အဆင်တန်ဆာတို့ကို ဝယ်ယူဆင်မြန်းပေးခြင်း
yào àifǔ qīzi
လင်ဝတ္တရား ၅ ပါး
၁။ အမြတ်တနိုး ခေါ်ဆို၊ ကြင်နာခြင်းဖြင့်၎င်း၊
၂။ နှိမ့်ချ၍ မခေါ်ဆို၊ မဆက်ဆံခြင်းဖြင့်၎င်း၊
၃။ မိမိမယားကိုလွန်၍ အခြားမိန်းမတို့၌ မပျော်ပါးခြင်းဖြင့်၎င်း၊
၄။ စားဖိုဆောင်အုပ်စိုးမှုကို လွှဲအပ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၊
၅။ အဝတ်တန်ဆာဥစ္စာကို ပေးကမ်းအပ်နှင်းခြင်းဖြင့်၎င်း ပြုစုအပ်၏။
လငျဝတ်တရား ငါးပါး - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
မွနျမာလူမြိုးတှမှော အတုယူစရာကောငျးတဲ့ လောကနီတိတှေ ရှိကွပါတယျ။ လိုကျနာကငျြ့သုံးခွငျးဖွငျ့ ပြျောရှငျခမျြးမွသေ့ော ဘဝမြားကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
ဇော့z ကနျြ့h(ငျ)ဖူးfတဲ့ ဝူရှနျ့(ငျ)ရှိုhဇဲယျz
ကနျြ(ငျ)ဟှာ့ ထိုကျတု ဟဲယျးအိုငျ
ရှိုးhရုr ခြှမျပု ကြောငျးခြူးh
ရှာဖှရေရှိလာသော ဥစ်စာဓနတို့ကို အပျနှငျးခွငျး
ပုယှီ ခြီထား ဖုfနှီ စီးထုနျး(ငျ)
ဝခြေီ့းဇဈz ကို့ကြိh ဖူfရှဈh
အဝတျအစား၊ အဆငျတနျဆာတို့ကို ဝယျယူဆငျမွနျးပေးခွငျး
လငျဝတ်တရား ၅ ပါး
၁။ အမွတျတနိုး ချေါဆို၊ ကွငျနာခွငျးဖွငျ့၎င်းငျး၊
၂။ နှိမျ့ခြ၍ မချေါဆို၊ မဆကျဆံခွငျးဖွငျ့၎င်းငျး၊
၃။ မိမိမယားကိုလှနျ၍ အခွားမိနျးမတို့၌ မပြျောပါးခွငျးဖွငျ့၎င်းငျး၊
၄။ စားဖိုဆောငျအုပျစိုးမှုကို လှဲအပျခွငျးဖွငျ့၎င်းငျး၊
၅။ အဝတျတနျဆာဥစ်စာကို ပေးကမျးအပျနှငျးခွငျးဖွငျ့၎င်းငျး ပွုစုအပျ၏။
>> ဗုဒ်ဓဘာသာကောငျးတဈယောကျ စာအုပျမှ
ဠင်းတ - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
7:16 PM C-Word , Chinese
ဠင်းတငှက်က အသေကောင်၊ အပုပ်ကောင်တွေကို စားသုံးတဲ့အတွက် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ငှက်တစ်မျိုးအဖြစ် မှတ်ယူကြပါတယ်။
ဠင်းတ - လင်းတ - လဒ လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
n) 秃鹫 tū jiù
ထူးကျို့ - ဠင်းတ
n) 秃鹰 tū yīng
ထူးယင်း(င်) - ဠင်းတ
n) 兀鹫 wū jiù
ဝူးကျို့ - ဠင်းတ
n) 兀鹰 wū yīng
ဝူးယင်း(င်) - ဠင်းတ
☞ အခြား အခေါ်အဝေါ်များ
狗头鹫 gǒu tóu jiù
ကိုထိုကျို့ - ဠင်းတ
夭勒 yāo lè
ယောင်းလဲာ့ - ဠင်းတ
狗头雕 gǒu tóu diāo
ကိုထိုတျောင်း - ဠင်းတ
座山雕 zuò shān diāo
ဇော့zရှန်းhတျောင်း - ဠင်းတ
狗头鹰 gǒu tóu yīng
ကိုထိုယင်း(င်) - ဠင်းတ
白头海雕 bái tóu hǎi diāo
ပိုင်းထိုဟိုင်တျောင်း - ဠင်းတ
白头鹰 bái tóu yīng
ပိုင်းထိုယင်း(င်) - ဠင်းတ
秃头雕 tū tóu diāo
ထူးထိုတျောင်း - ဠင်းတ
秃头鹰 tū tóu yīng
ထူးထိုယင်း(င်) - ဠင်းတ
美洲雕 měi zhōu diāo
မေကျိုးhတျောင်း - ဠင်းတ
肉垂秃鹫 ròu chuí tū jiù
ရို့rချွေhထူးကျို့ - ဠင်းတ
★ လေ့လာရန် ဆက်စပ်ဝေါဟာရများ
孟加拉秃鹫 mèng jiā lā tū jiù
မဲင့်(င်)ကျားလား ထူးကျို့ - ဠင်းတ ကျောဖြူ
大兀鹰 dà wū yīng
တာ့ဝူးယင်း(င်) - ဠင်းတ ထိပ်နီ
百鸟之王 bǎi niáo zhī wáng
ပိုင်နျောင်ကျီးhဝမ်(င်) - ဠင်းတ ထိပ်နီ
长嘴兀鹫 cháng zuǐ wū jiù
ချန်းh(င်)ဇွေzဝူးကျို့ - ဠင်းတ နှုတ်သီးရှည်
ဠငျးတ - တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
ဠငျးတငှကျက အသကေောငျ၊ အပုပျကောငျတှကေို စားသုံးတဲ့အတှကျ စကျဆုပျရှံရှာဖှယျငှကျတဈမြိုးအဖွဈ မှတျယူကွပါတယျ။
ဠငျးတ - လငျးတ - လဒ လို့လညျး ချေါကွပါတယျ။
ထူးကြို့ - ဠငျးတ
ထူးယငျး(ငျ) - ဠငျးတ
ဝူးကြို့ - ဠငျးတ
ဝူးယငျး(ငျ) - ဠငျးတ
☞ အခွား အချေါအဝျေါမြား
ကိုထိုကြို့ - ဠငျးတ
ယောငျးလဲာ့ - ဠငျးတ
ကိုထိုတြောငျး - ဠငျးတ
ဇော့zရှနျးhတြောငျး - ဠငျးတ
ကိုထိုယငျး(ငျ) - ဠငျးတ
ပိုငျးထိုဟိုငျတြောငျး - ဠငျးတ
ပိုငျးထိုယငျး(ငျ) - ဠငျးတ
ထူးထိုတြောငျး - ဠငျးတ
ထူးထိုယငျး(ငျ) - ဠငျးတ
မကြေိုးhတြောငျး - ဠငျးတ
ရို့rခြှေhထူးကြို့ - ဠငျးတ
★ လလေ့ာရနျ ဆကျစပျဝေါဟာရမြား
မဲငျ့(ငျ)ကြားလား ထူးကြို့ - ဠငျးတ ကြောဖွူ
တာ့ဝူးယငျး(ငျ) - ဠငျးတ ထိပျနီ
ပိုငျနြောငျကြီးhဝမျ(ငျ) - ဠငျးတ ထိပျနီ
ခနျြးh(ငျ)ဇှေzဝူးကြို့ - ဠငျးတ နှုတျသီးရှညျ
ကြိယာ 打 မှာ တခြားအဓိပ္ပာယ် ရှိသေးလား။
9:45 AM C-Word , Chinese
တရုတ်ဘာသာရှိ ကြိယာ 打 ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ - ရိုက်နှက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြားဝေါဟာရများနှင့် တွဲစပ်လိုက်သောအခါ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ အသုံးများသော ဝေါဟာရများကို မှတ်သားထားပါ။
打 dǎ - da3 - da - ㄉㄚ
တာပေါင်း - ပါဆယ်ထုပ်သည်
打草 dǎ cǎo
တားဆောင် - မြက်ရိတ်သည်
打洞 dǎ dòng
တာတုံ့(င်) - အပေါက်ဖောက်သည်
打虫 dǎ chóng
တာချုံh(င်) - သန်ချသည်
打赌 dǎ dǔ
တားတူ - လောင်းကစားသည်
打鼓 dǎ gǔ
တားကူ - ဗုံတီးသည်
打火 dǎ huǒ
တားဟော် - မီးခြစ်ခြစ်သည်
打捞 dǎ lāo
တာလောင်း - ဆယ်ယူသည်
打牌 dǎ pái
တာဖိုင် - ဖဲရိုက်သည်
打票 dǎ piào
တာဖျောက် - လက်မှတ်ဝယ်သည်
打气 dǎ qì
တာချိ - လေထိုးသည်
打扫 dǎ sǎo
တားစောင် - တံမြက်စည်းလှဲသည်
打伞 dǎ sǎn
တားစန် - ထီးဆောင်းသည်
打算 dǎ suàn
တာစွမ့် - ကြံစည်စိတ်ကူးသည်
打胎 dǎ tāi
တာထိုင်း - ကိုယ်ဝန်ဖျက်သည်
打听 dǎ tīng
တာထင်း(င်) - စုံစမ်းသည်
打针 dǎ zhēn
တာကျဲင်းh - စုံစမ်းသည်
打字 dǎ zì
တာဇစ်z - စာရိုက်သည်
打电脑 dǎ diàn nǎo
တာတျန့်နောင် - ကွန်ပျူတာရိုက်သည်
打电话 dǎ diàn huà
တာတျန့်ဟွာ့ - ဖုန်းဆက်သည်
打坐 dǎ zuò
တာဇော့z - ကမ္မဌာန်းထိုင်သည်
打烧饼 dǎ shāo bǐng
တာရှောင်းhပျင်(င်) - နံပြားဖုတ်သည်
打架 dǎ jià
တာကျာ့ - ရန်ဖြစ်သည်
ကွိယာ 打 မှာ တခွားအဓိပ်ပာယျ ရှိသေးလား။
တရုတျဘာသာရှိ ကွိယာ 打 ၏ အဓိပ်ပာယျမှာ - ရိုကျနှကျခွငျး ဖွဈသညျ။ သို့သျော အခွားဝေါဟာရမြားနှငျ့ တှဲစပျလိုကျသောအခါ အဓိပ်ပာယျအမြိုးမြိုး ထှကျပျေါလာပါသညျ။ အသုံးမြားသော ဝေါဟာရမြားကို မှတျသားထားပါ။
တာပေါငျး - ပါဆယျထုပျသညျ
တားဆောငျ - မွကျရိတျသညျ
တာတုံ့(ငျ) - အပေါကျဖောကျသညျ
တာခြုံh(ငျ) - သနျခသြညျ
တားတူ - လောငျးကစားသညျ
တားကူ - ဗုံတီးသညျ
တားဟျော - မီးခွဈခွဈသညျ
တာလောငျး - ဆယျယူသညျ
တာဖိုငျ - ဖဲရိုကျသညျ
တာဖြောကျ - လကျမှတျဝယျသညျ
တာခြိ - လထေိုးသညျ
တားစောငျ - တံမွကျစညျးလှဲသညျ
တားစနျ - ထီးဆောငျးသညျ
တာစှမျ့ - ကွံစညျစိတျကူးသညျ
တာထိုငျး - ကိုယျဝနျဖကျြသညျ
တာထငျး(ငျ) - စုံစမျးသညျ
တာကြဲငျးh - စုံစမျးသညျ
တာဇဈz - စာရိုကျသညျ
တာတနျြ့နောငျ - ကှနျပြူတာရိုကျသညျ
တာတနျြ့ဟှာ့ - ဖုနျးဆကျသညျ
တာဇော့z - ကမ်မဌာနျးထိုငျသညျ
တာရှောငျးhပငျြ(ငျ) - နံပွားဖုတျသညျ
တာကြာ့ - ရနျဖွဈသညျ
အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ဝက်။
9:33 AM C-Word , Chinese
မိတ်ဆွေတို့လည်း ကြိုက်တတ်ရင် စားလို့ရပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက် ဝက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
瘦肉 shòu ròu
ရှို့hရို့r - အသားချည်း
肥肉 féi ròu
ဖေfရို့r - အဆီများတဲ့ အသား
五花肉 wǔ huā ròu
ဝူဟွားရို့r - သုံးထပ်သား
里脊肉 lǐ jì ròu
လီကျိရို့r - မိုးခိုသား
排骨 pái gǔ
ဖိုင်းကူ - ဝက်နံရိုး
猪头肉 zhū tóu ròu
ကျူးhထိုရို့r - ဝက်ခေါင်းသား
猪皮 zhū pí
ကျူးhဖျီ - ဝက်ခေါက်
猪蹄 zhū tí
ကျူးhထီ - ဝက်ခြေထောက်
香肠 xiāng cháng
ရှမ်း(င်)ချန်h(င်) - ဝက်အူချောင်း
火腿 huǒ tuǐ
ဟောထွေ - ဝက်ပေါင်ခြောက်
东波肉 dōng bō ròu
တုံး(င်)ပေါရို့r - ဝက်စတူး
猪肉丸子 zhū ròu wán zi
ကျူးhရို့r ဝမ်ဇစ်z - ဝက်သားလုံးကြော်
猪肉串 zhū ròu chuàn
ကျူးhရို့rချွမ့်h - ဝက်သားဒုတ်ထိုး
回锅肉 huí guō ròu
ဟွေကောရို့r - ဝက်ကြွပ်ကြော်။ ဝက်စပ်ကြော်
红烧肉 hóng shāo ròu
ဟုန်(င်)ရှောင်းhရို့r - ဝက်သားနီချက်
乳猪 rǔ zhū
ရူrကျူးh - မြေမနင်းဝက်
အသီးမှာ သရကျ၊ အသားမှာ ဝကျ။
မိတျဆှတေို့လညျး ကွိုကျတတျရငျ စားလို့ရပါတယျ။ ဒီနအေ့တှကျ ဝကျနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဝေါဟာရလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ရှို့hရို့r - အသားခညျြး
ဖေfရို့r - အဆီမြားတဲ့ အသား
ဝူဟှားရို့r - သုံးထပျသား
လီကြိရို့r - မိုးခိုသား
ဖိုငျးကူ - ဝကျနံရိုး
ကြူးhထိုရို့r - ဝကျခေါငျးသား
ကြူးhဖြီ - ဝကျခေါကျ
ကြူးhထီ - ဝကျခွထေောကျ
ရှမျး(ငျ)ခနျြh(ငျ) - ဝကျအူခြောငျး
ဟောထှေ - ဝကျပေါငျခွောကျ
တုံး(ငျ)ပေါရို့r - ဝကျစတူး
ကြူးhရို့r ဝမျဇဈz - ဝကျသားလုံးကွျော
ကြူးhရို့rခြှမျ့h - ဝကျသားဒုတျထိုး
ဟှကေောရို့r - ဝကျကွှပျကွျော။ ဝကျစပျကွျော
ဟုနျ(ငျ)ရှောငျးhရို့r - ဝကျသားနီခကျြ
ရူrကြူးh - မွမေနငျးဝကျ
Posted by Hla Khine Nu San
သင် ဘာမေဂျာနဲ့ ကျောင်းပြီးတာလဲ။
9:28 AM C-Word , Chinese
တက္ကသိုလ်မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ major ဘာသာရပ်တွေကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။
数学 shù xué
ရှုhရွှယ် - သချာင်္
地理学 dì lǐ xué
တိလီရွှယ် - ပထဝီ
历史学 lì shǐ xué
လိရှီhရွှယ် - သမိုင်း
经济学 jīng jì xué
ကျင်း(င်)ကျိရွှယ် - ဘောဂဗေဒ
生物学 shēng wù xué
ရှဲင်းh(င်)ဝုရွှယ် - ဇီဝဗေဒ
化学 huà xué
ဟွာ့ရွှယ် - ဓာတုဗေဒ
物理学 wù lǐ xué
ဝုလီရွှယ် - ရူပဗေဒ
植物学 zhí wù xué
ကျီhဝုရွှယ် - ရုက္ခဗေဒ
动物学 dòng wù xué
တုံ့(င်)ဝုရွှယ် - သတ္တဗေဒ
海洋学 hǎi yáng xué
ဟိုင်ယန်း(င်)ရွှယ် - အဏ္ဏဝါဗေဒ
地质学 dì zhì xué
တိကျိhရွှယ် - ဘူမိဗေဒ
山态学 shān tài xué
ရှန်းhထိုက်ရွှယ် - ဂီရိဗေဒ
药物学 yào wù xué
ယောက်ဝုရွှယ် - ဆေးဝါးဗေဒ
水文学 shuǐ wén xué
ရွှေhဝဲင်းရွှယ် - ဇလဗေဒ
气象学 qì xiàng xué
ချိရှန့်(င်)ရွှယ် - မိုးလေဝသဗေဒ
天文学 tiān wén xué
ထျန်းဝဲင်းရွှယ် - နက္ခတ္တဗေဒ
星占学 xīng zhàn xué
ရှင်း(င်)ကျန့်hရွှယ် - Astrology
သငျ ဘာမဂြောနဲ့ ကြောငျးပွီးတာလဲ။
တက်ကသိုလျမှာ သငျခဲ့ရတဲ့ major ဘာသာရပျတှကေို တရုတျလို ဘယျလိုချေါသလဲ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျနျော။
ရှုhရှယျ - သခြာင်္
တိလီရှယျ - ပထဝီ
လိရှီhရှယျ - သမိုငျး
ကငျြး(ငျ)ကြိရှယျ - ဘောဂဗဒေ
ရှဲငျးh(ငျ)ဝုရှယျ - ဇီဝဗဒေ
ဟှာ့ရှယျ - ဓာတုဗဒေ
ဝုလီရှယျ - ရူပဗဒေ
ကြီhဝုရှယျ - ရုက်ခဗဒေ
တုံ့(ငျ)ဝုရှယျ - သတ်တဗဒေ
ဟိုငျယနျး(ငျ)ရှယျ - အဏ်ဏဝါဗဒေ
တိကြိhရှယျ - ဘူမိဗဒေ
ရှနျးhထိုကျရှယျ - ဂီရိဗဒေ
ယောကျဝုရှယျ - ဆေးဝါးဗဒေ
ရှေhဝဲငျးရှယျ - ဇလဗဒေ
ခြိရှနျ့(ငျ)ရှယျ - မိုးလဝေသဗဒေ
ထနျြးဝဲငျးရှယျ - နက်ခတ်တဗဒေ
ရှငျး(ငျ)ကနျြ့hရှယျ - Astrology
9:25 AM C-Word , Chinese
အနုပညာဆိုတာ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်၊ တိမ်မယောင်နဲ့ နက်တယ်။ ပါရမီရှိမှ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်လို့လည်း တချို့က ပြောကြတယ်။
ဟွာ့ကျား - ပန်းချီဆရာ
漫画家 màn huà jiā
မန့်ဟွာ့ကျား - ကာတွန်းဆရာ
书法家 shū fǎ jiā
ရှူးhဖာfကျား - လက်ရေးလှ ပညာရှင်
诗人 shī rén
ရှီးhရဲင်r - ကဗျာဆရာ
小说家 xiǎo shuō jiā
ရှောင်ရှောhကျား - ဝတ္ထုရေးဆရာ
编剧 biān jù
ပြန်းကျွိ - ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ
作曲家 zuò qǔ jiā
ဇော့zချွီကျား - သီချင်းရေးဆရာ
剧作家 jù zuò jiā
ကျွိဇော့zကျား - ပြဇာတ်ရေးဆရာ
အနုပညာဆိုတာ လှယျမယောငျနဲ့ ခကျ၊ တိမျမယောငျနဲ့ နကျတယျ။ ပါရမီရှိမှ လုပျဆောငျနိုငျကွတယျလို့လညျး တခြို့က ပွောကွတယျ။
ဟှာ့ကြား - ပနျးခြီဆရာ
မနျ့ဟှာ့ကြား - ကာတှနျးဆရာ
ရှူးhဖာfကြား - လကျရေးလှ ပညာရှငျ
ရှီးhရဲငျr - ကဗြာဆရာ
ရှောငျရှောhကြား - ဝတ်ထုရေးဆရာ
ပွနျးကြှိ - ဇာတျညှနျးရေးဆရာ
ဇော့zခြှီကြား - သီခငျြးရေးဆရာ
ကြှိဇော့zကြား - ပွဇာတျရေးဆရာ
Posted by Khin Khin Hla
မျိုးပြ စကားလုံး - 把 bǎ
9:20 AM C-Word , Chinese
量词 လို့ ခေါ်တဲ့ မျိုးပြစကားလုံး - Measure Word တွေဟာ တရုတ်ဘာသာစကားရဲ့ အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရ လွယ်ကူစေရန် တစုတစည်းတည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
把 - bǎ - ba3 - ba - ㄅㄚ
一把剪刀 yì bǎ jiǎn dāo
ယိပါး ကျန်တောင်း - ကတ်ကြေး တစ်လက်
一把刀子 yì bǎ dāo zi
ယိပါ တောင်းဇစ်z - ဓား တစ်လက်
一把尺 yì bǎ chǐ
ယိပါး ချီh - ပေတံ တစ်ချောင်း
一把好手 yì bǎ hǎo shǒu
ယိပါ ဟောင်းရှိုh - လူတော် တစ်ယောက်
一把牙刷 yì bǎ yá shuā
ယိပါ ယာရွှားh - သွားပွတ်တံ တစ်ချောင်း
一把梳子 yì bǎ shū zi
ယိပါ ရှူးhဇစ်z - ဘီး တစ်ချောင်း
一把钥匙 yì bǎ yào shi
ယိပါ ယောက်ရှစ်h - သော့ တစ်ချောင်း
一把伞 yì bǎ sǎn
ယိပါး စန် - ထီး တစ်လက်
一把椅子 yì bǎ yǐ zi
ယိပါး ယီဇစ်z - ကုလားထိုင် တစ်လုံး
一把枪 yì bǎ qiāng
ယိပါ ချန်း(င်) - သေနတ် တစ်လက်
一把扇子 yì bǎ shàn zi
ယိပါ ရှန့်hဇစ်z - ယပ်တောင် တစ်ချောင်း
一把茶壶 yì bǎ chá hú
ယိပါ - ချားhဟူ - ရေနွေးကရား တစ်လုံး
一把米 yì bǎ mǐ
ယိပါး မီ - ဆန် တစ်ဆုပ်
一把瓜子 yì bǎ guā zǐ
ယိပါ ကွားဇီz - ကွာစိ လက်တစ်ဆုပ်
一把柴 yì bǎ chái
ယိပါ ချိုင်h - ထင်း တစ်စည်း
一把香蕉 yì bǎ xiāng jiāo
ယိပါ ရှမ်း(င်)ကျောင်း - ငှက်ပျောသီး တစ်ဖီး
မြိုးပွ စကားလုံး - 把 bǎ
量词 လို့ ချေါတဲ့ မြိုးပွစကားလုံး - Measure Word တှဟော တရုတျဘာသာစကားရဲ့ အရမျး အရေးကွီးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ လလေ့ာရ လှယျကူစရေနျ တစုတစညျးတညျး ဖျောပွထားပါတယျ။
ယိပါး ကနျြတောငျး - ကတျကွေး တဈလကျ
ယိပါ တောငျးဇဈz - ဓား တဈလကျ
ယိပါး ခြီh - ပတေံ တဈခြောငျး
ယိပါ ဟောငျးရှိုh - လူတျော တဈယောကျ
ယိပါ ယာရှားh - သှားပှတျတံ တဈခြောငျး
ယိပါ ရှူးhဇဈz - ဘီး တဈခြောငျး
ယိပါ ယောကျရှဈh - သော့ တဈခြောငျး
ယိပါး စနျ - ထီး တဈလကျ
ယိပါး ယီဇဈz - ကုလားထိုငျ တဈလုံး
ယိပါ ခနျြး(ငျ) - သနေတျ တဈလကျ
ယိပါ ရှနျ့hဇဈz - ယပျတောငျ တဈခြောငျး
ယိပါ - ခြားhဟူ - ရနှေေးကရား တဈလုံး
ယိပါး မီ - ဆနျ တဈဆုပျ
ယိပါ ကှားဇီz - ကှာစိ လကျတဈဆုပျ
ယိပါ ခြိုငျh - ထငျး တဈစညျး
ယိပါ ရှမျး(ငျ)ကြောငျး - ငှကျပြောသီး တဈဖီး
မျိုးပြ စကားလုံး - 本 běn
9:16 AM C-Word , Chinese
本 běn - ben3 - ben - ㄅㄣ
一本书 yì běn shū
ယိပဲင် ရှူးh - စာအုပ် တစ်အုပ်
一本杂志 yì běn zá zhì
ယိပဲင် ဇာzကျိh - မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ်
一本画报 yì běn huà bào
ယိပဲင် ဟွာ့ပေါက် - ရုပ်စုံဂျာနယ် တစ်စောင်
一本字典 yì běn zì diǎn
ယိပဲင် ဇစ်zတျန် - အဘိဓာန် တစ်အုပ်
一本词典 yì běn cí diǎn
ယိပဲင် ဆေးတျန် - အဘိဓာန် တစ်အုပ်
一本小说 yì běn xiǎo shuō
ယိပဲင်း ရှောင်ရှောh - ဝတ္ထု တစ်အုပ်
一本地图 yì běn dì tú
ယိပဲင် တိထူ - မြေပုံ တစ်အုပ်
မြိုးပွ စကားလုံး - 本 běn
ယိပဲငျ ရှူးh - စာအုပျ တဈအုပျ
ယိပဲငျ ဇာzကြိh - မဂ်ဂဇငျး တဈအုပျ
ယိပဲငျ ဟှာ့ပေါကျ - ရုပျစုံဂြာနယျ တဈစောငျ
ယိပဲငျ ဇဈzတနျြ - အဘိဓာနျ တဈအုပျ
ယိပဲငျ ဆေးတနျြ - အဘိဓာနျ တဈအုပျ
ယိပဲငျး ရှောငျရှောh - ဝတ်ထု တဈအုပျ
ယိပဲငျ တိထူ - မွပေုံ တဈအုပျ
မျိုးပြ စကားလုံး - 杯 bēi
9:07 AM C-Word , Chinese
杯 - bēi - bei1 - bei - ㄅ ㄟ
一杯水 yì bēi shuǐ
ယိပေး ရွှေh - ရေ တစ်ခွက်
一杯牛奶 yì bēi niú nǎi
ယိပေး နျိုးနိုင် - နွားနို့ တစ်ခွက်
一杯咖啡 yì bēi kā fēi
ယိပေး ခဲါးဖေးf - ကော်ဖီ တစ်ခွက်
一杯茶 yì bēi chá
ယိပေး ချာh - လ္ဘက်ရည် တစ်ခွက်
一杯酒 yì bēi jiǔ
ယိပေး ကျို - အရက် တစ်ခွက်
မြိုးပွ စကားလုံး - 杯 bēi
ယိပေး ရှေh - ရေ တဈခှကျ
ယိပေး နြိုးနိုငျ - နှားနို့ တဈခှကျ
ယိပေး ခဲါးဖေးf - ကျောဖီ တဈခှကျ
ယိပေး ခြာh - လ်ဘကျရညျ တဈခှကျ
ယိပေး ကြို - အရကျ တဈခှကျ
7:02 AM C-Word , Chinese
မိမိတို့ အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထား ၀တ်ဆင်ကြတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ အဆင်တန်ဆာများကို တရုတ်လို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
耳环 ěr huán
အဲယ်rဟွမ် - နားကွင်း
耳坠 ěr zhuì
အဲယ်rကျွေ့h - နားဆွဲ
链子 liàn zi
လျန့်ဇစ်z - လည်ဆွဲ
手镯 shǒu zhuó
ရှိုhကျော်h - လက်ကောက်
手链 shǒu liàn
ရှိုhလျန့် - ဟန်းချိန်း
脚镯 jiǎo zhuó
ကျောင်ကျော်h - ခြေကျင်း
脚链 jiǎo liàn
ကျောင်လျန့် - Foot chain
戒指 jiè zhǐ
ကျဲ့ကျီh - လက်စွပ်
发针 fà zhēn
ဖာ့fကျင်းh - ဆံထိုး
项链坠 xiàng liàn zhuì
ရှန့်(င်)လျန့်ကျွေ့h - ဆွဲသီး
胸针 xiōng zhēn
ရှုံး(င်)ကျဲင်းh - ရင်ထိုး
发夹 fà jiā
ဖာ့fကျား - ဆံညှပ်
မိမိတို့ အမွတျတနိုးတနျဖိုးထား ဝတျဆငျကွတဲ့ လကျဝတျရတနာ အဆငျတနျဆာမြားကို တရုတျလို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့။
အဲယျrဟှမျ - နားကှငျး
အဲယျrကြှေ့h - နားဆှဲ
လနျြ့ဇဈz - လညျဆှဲ
ရှိုhကြျောh - လကျကောကျ
ရှိုhလနျြ့ - ဟနျးခြိနျး
ကြောငျကြျောh - ခွကေငျြး
ကြောငျလနျြ့ - Foot chain
ကြဲ့ကြီh - လကျစှပျ
ဖာ့fကငျြးh - ဆံထိုး
ရှနျ့(ငျ)လနျြ့ကြှေ့h - ဆှဲသီး
ရှုံး(ငျ)ကြဲငျးh - ရငျထိုး
ဖာ့fကြား - ဆံညှပျ
ကုလားထိုင် အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
6:57 AM C-Word , Chinese
အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေကို လေ့လာကြမယ်။ ဒီနေ့တော့ ထိုင်စရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရတွေကို လေ့လာကြပါစို့။
椅子 yǐ zi
ယီဇစ်z - ကုလားထိုင်
藤椅 téng yǐ
ထဲင်း(င်)ယီ - ကြိမ်ကုလားထိုင်
按摩椅 àn mó yǐ
အန့်မောယီ - အနှိပ်ခုံ
转椅 zhuàn yǐ
ကျွမ့်hယီ - ဆုံလည် ကုလားထိုင်
靠椅 kào yǐ
ခေါက်ယီ - ပက်လက်ကုလားထိုင်
折椅 zhé yǐ
ကျဲhယီ - ခေါက်ကုလားထိုင်
高椅子 gāo yǐ zi
ကောင်းယီဇစ်z - ကုလားထိုင်အမြင့်
凳子 dèng zi
တဲင့်(င်)ဇစ်z - ခွေးခြေ။ ခုံပု
垫子 diàn zi
တျန့်ဇစ်z - ဖုံ။ ကူရှင်
沙发 shā fā
ရှားhဖားf - ဆိုဖာ
ကုလားထိုငျ အမြိုးမြိုး အချေါအဝျေါမြား။
အိမျသုံးပရိဘောဂတှကေို လလေ့ာကွမယျ။ ဒီနတေ့ော့ ထိုငျစရာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဝေါဟာရတှကေို လလေ့ာကွပါစို့။
ယီဇဈz - ကုလားထိုငျ
ထဲငျး(ငျ)ယီ - ကွိမျကုလားထိုငျ
အနျ့မောယီ - အနှိပျခုံ
ကြှမျ့hယီ - ဆုံလညျ ကုလားထိုငျ
ခေါကျယီ - ပကျလကျကုလားထိုငျ
ကြဲhယီ - ခေါကျကုလားထိုငျ
ကောငျးယီဇဈz - ကုလားထိုငျအမွငျ့
တဲငျ့(ငျ)ဇဈz - ခှေးခွေ။ ခုံပု
တနျြ့ဇဈz - ဖုံ။ ကူရှငျ
ရှားhဖားf - ဆိုဖာ
သင် ဘာအလုပ် လုပ်ပါသလဲ။
6:51 AM C-Word , Chinese
သင့်မှာ အလုပ်ရှိပါသလား။ သင် ဘာအလုပ် လုပ်ပါသလဲ။ ယခု အလုပ်အကိုင်တချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။
联合国秘书长 lián hé guó mì shū zhǎng
လျန်းဟဲယ်းကော် မိရှူးhကျန်h(င်) - ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်
外交家 wài jiāo jiā
ဝိုက်ကျောင်းကျား - သံတမန်
大使 dà shǐ
တာ့ရှီh - သံအမတ်
宇航员 yǔ huáng yuán
ယွီဟွမ်း(င်)ယွမ် - အာကာသယာဉ်မှူး
机长 jī zhǎng
ကျီးကျန်h(င်) - chief pilot
语言学家 Yǔ yán xué jiā
ယွီယန်းရွှယ်ကျား - ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်
ကုံး(င်)ချဲင်h(င်)ရှီးh - အင်ဂျင်နီယာ
交通警察 jiāo tōng jǐng chá
ကျောင်းထုံး(င်)ကျင်(င်)ချာh - ယာဉ်ထိန်းရဲ
警探 jǐng tàn
ကျင်(င်)ထန့် - ရဲစုံထောက်
法官 fǎ guān
ဖာfကွမ်း - တရားသူကြီး
公证人 gōng zhèng rén
ကုံး(င်)ကျဲင့်h(င်)ရဲင်r - notary
法警 fǎ jǐng
ဖားfကျင်(င်) - ဘိလစ်စာရေး
法医 fǎ yī
ဖာfယီး - မှုခင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်
军医 jūn yī
ကျွင်းယီး - စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်
兽医 shòu yī
ရှို့hယီး - တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်
护士 hù shì
ဟုရှစ်h - သူနာပြု
服务员 fú wù yuán
ဖူfဝုယွမ် - waiter | ဝိတ်တာ
模特 mó tè
မော်ထဲ့ - model | မော်ဒယ်
သငျ ဘာအလုပျ လုပျပါသလဲ။
သငျ့မှာ အလုပျရှိပါသလား။ သငျ ဘာအလုပျ လုပျပါသလဲ။ ယခု အလုပျအကိုငျတခြို့နဲ့ မိတျဆကျပေးပါ့မယျ။
လနျြးဟဲယျးကျော မိရှူးhကနျြh(ငျ) - ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှုးခြုပျ
ဝိုကျကြောငျးကြား - သံတမနျ
တာ့ရှီh - သံအမတျ
ယှီဟှမျး(ငျ)ယှမျ - အာကာသယာဉျမှူး
ကြီးကနျြh(ငျ) - chief pilot
ယှီယနျးရှယျကြား - ဘာသာဗဒေ ပညာရှငျ
ကုံး(ငျ)ခြဲငျh(ငျ)ရှီးh - အငျဂငျြနီယာ
ကြောငျးထုံး(ငျ)ကငျြ(ငျ)ခြာh - ယာဉျထိနျးရဲ
ကငျြ(ငျ)ထနျ့ - ရဲစုံထောကျ
ဖာfကှမျး - တရားသူကွီး
ကုံး(ငျ)ကြဲငျ့h(ငျ)ရဲငျr - notary
ဖားfကငျြ(ငျ) - ဘိလဈစာရေး
ဖာfယီး - မှုခငျးဘကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျ
ကြှငျးယီး - စဈဘကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျ
ရှို့hယီး - တိရစ်ဆာနျဆေးကု ဆရာဝနျ
ဟုရှဈh - သူနာပွု
ဖူfဝုယှမျ - waiter | ဝိတျတာ
မျောထဲ့ - model | မျောဒယျ
ဘီဒို အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
6:47 AM C-Word , Chinese
အိမ်ထောင်ပရိဘောဂတချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ သင်ဝယ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့အခါ သွားဝယ်လို့ရအောင်ပါ။
玻璃柜 bō li guì
ပေါလီကွေ့ - မှန်ဘီဒို
碗碟柜 wǎn dié guì
ဝမ်တျန်ကွေ့ - ပန်းကန်ဘီဒို
书柜 shū guì
ရှူးhကွေ့ - စာအုပ်ဘီဒို
五斗柜 wǔ dǒu guì
ဝူးတိုကွေ့ - အံဆွဲဘီဒို
床头柜 chuáng tóu guì
ချွမ်းh(င်)ထိုကွေ့ - ကုတင်ဘေးဘီဒို
靠墙组合柜 kào qiáng zǔ hé guì
ခေါက်ချန်(င်)ဇူzဟဲယ်ကွေ့ - ဘီဒိုတွဲ
壁橱 bì chú
ပိချူh - နံရံကပ်ဘီဒို
小橱柜 xiǎo chú guì
ရှောင်ချူhကွေ့ - ကြောင်အိမ်
文件柜 wén jiàn guì
ဝဲင်ကျန့်ကွေ့ - file ဘီဒို
ဘီဒို အမြိုးမြိုး အချေါအဝျေါမြား။
အိမျထောငျပရိဘောဂတခြို့နဲ့ မိတျဆကျပေးပါ့မယျ။ သငျဝယျဖို့ ဆန်ဒရှိတဲ့အခါ သှားဝယျလို့ရအောငျပါ။
ပေါလီကှေ့ - မှနျဘီဒို
ဝမျတနျြကှေ့ - ပနျးကနျဘီဒို
ရှူးhကှေ့ - စာအုပျဘီဒို
ဝူးတိုကှေ့ - အံဆှဲဘီဒို
ခြှမျးh(ငျ)ထိုကှေ့ - ကုတငျဘေးဘီဒို
ခေါကျခနျြ(ငျ)ဇူzဟဲယျကှေ့ - ဘီဒိုတှဲ
ပိခြူh - နံရံကပျဘီဒို
ရှောငျခြူhကှေ့ - ကွောငျအိမျ
ဝဲငျကနျြ့ကှေ့ - file ဘီဒို
ဗီရို - ဘီရို - ဘီဒို - ဗီဒို
哨棒 - မြန်မာလို ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
10:50 PM C-Word , Chinese
တရုတ်စကား လေ့လာသူတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခု ရှိပါတယ်။ တချို့ဝေါဟာရတွေက အဘိဓာန်ထဲမှာ ရှာလို့မတွေ့နိုင်သလို၊ တွေ့ပြန်ရင်လည်း ရှင်းလင်းချက် အပြည့်အစုံမပါဝင်ပါဘူး။
哨棒 - shao4 bang4 - shào bàng
ㄕㄠ ㄅㄤ - shaobang
ဒီဝေါဟာရလေးက 武松打虎 ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးပါ။
哨棒 shào bàng ဆိုတာက တုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းပါ။
တောင်တက်ရင် တောင်ဝှေးလို ထောက်ပြီးတက်လို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေကို ခြောက်လှန့်မောင်းနှင်တဲ့အခါ ရိုက်နှက်ဖို့အတွက်လည်း သုံးပါတယ်။ အဲဒီတုတ်ချောင်းမှာ ထူးခြားတာတစ်ခုက တစ်ဖက်ထိပ်မှာ အခေါင်းပေါက်ပါပြီး လေမှုတ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါကို မှုတ်လိုက်ရင် ကျားဟိန်းသံလို အသံမျိုးထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီအသံကို ကြားပြီး ဝံပုလွေတွေက ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဝံပုလွေတွေက အရမ်းသောင်းကျန်းတော့ သူတို့ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ အဲဒီတုတ်ချောင်းကို သုံးတာပါ။
哨棒 - မွနျမာလို ဘာအဓိပ်ပာယျလဲ။
တရုတျစကား လလေ့ာသူတှေ ကွုံတှရေ့တဲ့ အခကျအခဲတဈခု ရှိပါတယျ။ တခြို့ဝေါဟာရတှကေ အဘိဓာနျထဲမှာ ရှာလို့မတှနေို့ငျသလို၊ တှပွေ့နျရငျလညျး ရှငျးလငျးခကျြ အပွညျ့အစုံမပါဝငျပါဘူး။
ဒီဝေါဟာရလေးက 武松打虎 ထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ စကားလုံးတဈလုံးပါ။
哨棒 shào bàng ဆိုတာက တုတျခြောငျးတဈခြောငျးပါ။
တောငျတကျရငျ တောငျဝှေးလို ထောကျပွီးတကျလို့ရပါတယျ။ နောကျပွီး သားရဲတိရိစ်ဆာနျတှကေို ခွောကျလှနျ့မောငျးနှငျတဲ့အခါ ရိုကျနှကျဖို့အတှကျလညျး သုံးပါတယျ။ အဲဒီတုတျခြောငျးမှာ ထူးခွားတာတဈခုက တဈဖကျထိပျမှာ အခေါငျးပေါကျပါပွီး လမှေုတျလို့ရပါတယျ။ အဲဒါကို မှုတျလိုကျရငျ ကြားဟိနျးသံလို အသံမြိုးထှကျလာပါတယျ။ အဲဒီအသံကို ကွားပွီး ဝံပုလှတှေကေ ကွောကျလနျ့ထှကျပွေးကွပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက ဝံပုလှတှေကေ အရမျးသောငျးကနျြးတော့ သူတို့ရနျကို ကာကှယျဖို့ အဲဒီတုတျခြောငျးကို သုံးတာပါ။
သေသွားမယ်၊ ရှင်သွားမယ်၊ မသေမရှင် ဖြစ်သွားမယ်။
10:11 AM C-Dialogue , Chinese
ကိုယ့်ရည်းစား ကောင်မလေးက ရစ်နည်းပေါင်းစုံကို တဖက်ကမ်းခတ်နေရင်...ကဲ..ပြော ... ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။
☞ Qīn ài de, zhōumò yào bú yào chū qù wán?
☞ ချင်းအိုက်တဲ့ ကျိုးhမော့ ယောက်ပူယောက် ချူးhချွိဝမ်
☞ ခိုခိုရေ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ လျှောက်လည်ကြမလား။
☞ Hǎo a! Nǐ xiǎng qù nǎlǐ?
☞ ဟောင်အား နီးရှန်(င်)ချွိနားလီ
☞ အိုကေ။ သဲ ဘယ်သွားချင်လဲ။
☞ Nǎlǐ dōu hǎo, zhǐ yào hé nǐ zài yìqǐ.
☞ နားလီတိုးဟောင် ကျီhယောက် ဟဲယ်းနီဇိုက်zယိချီ
☞ ဘယ်ဖြစ်ဖြစ် ရပါတယ်၊ ခိုခိုနဲ့ အတူတူ ရှိနေရင် ပြီးရော။
☞ Qù guàngjiē.
☞ window shopping ထွက်မယ်။
☞ Rén duō, bú yào.
☞ ရဲင်rတော ပူယောက်
☞ လူများတယ်၊ မသွားဘူး။
☞ Qù gōngyuán huá chuán.
☞ ချွိကုံး(င်)ယွမ် ဟွားချွမ်h
☞ ပန်းခြံသွားပြီး လှေစီးမယ်။
☞ Hǎo shài, bú yào.
☞ ဟောင်ရှိုက်h ပူယောက်
☞ နေအရမ်းပူတယ်၊ မသွားဘူး။
☞ Qù chàng gē.
☞ Hǎo wúliáo, bú yào.
☞ ဟောင်ဝူးလျောင် ပူယောက်
☞ ပျင်းစရာကြီး၊ မသွားဘူး။
☞ Qù pá shān .
☞ ချွိ ဖာရှန်းh
☞ Hǎo lèi, bú yào.
☞ ဟောင်လေ့ ပူယောက်
☞ မောတယ်၊ မသွားဘူး။
☞ Qù shāngchǎng chī dōngxi, mǎi yīfu, kàn diànyǐng.
☞ ချွိရှန်းh(င်)ချန်h(င်) ချီးhတုံး(င်)ရှိ မိုင်ယီးဖုf ခန့်တျန့်ယင်(င်)
☞ ရှော့ပင်းမောလ်သွားပြီး စားကြသောက်ကြမယ်၊ အဝတ်အစား ဝယ်မယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်။
☞ Měi cì dōu shì zhèyàng, bú yào, bú yào.
☞ မေဆစ်တိုးရှစ်h ကျဲ့hယန့်(င်) ပူယောက် ပူယောက်
☞ အမြဲတမ်း အဲဒီချည်းပဲ၊ မသွားဘူး၊ မသွားဘူး။
☞ Nà wǒmen bù chū qù le.
☞ နာ့ ဝေါ်မဲင် ပုချူးhချွိလဲာ့
☞ ဒါဆိုလည်း ဘယ်မှ မသွားတော့ဘူးကွာ။
☞ Wèi shénme bù chū qù? Nǐ shì bú ài wǒ le?
☞ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပုချူးhချွိ နီရှစ်h ပူအိုက်ဝေါ်လဲာ့
☞ ဘာလို့ မသွားရမှာလဲ။ ခိုခိုက သဲကို မချစ်တော့ဘူးလား။
☞ Qīn ài de, wǒ zuì ài nǐ le.
☞ ချင်းအိုက်တဲ့ ဝေါ်ဇွေ့zအိုက်နီလဲာ့
☞ သဲကလည်း၊ ကိုယ်က သဲကို အချစ်ဆုံးပါ။
☞ Wǒ bú xìn, wǒmen fēnshǒu ba.
☞ ဝေါ်ပူရှင့် ဝေါ်မဲင် ဖဲင်းfရှိုhပါ့
☞ မယုံဘူး၊ ခိုခိုနဲ့ ပြတ်ပြီ၊ ဒါပဲ။
☞ Qīn ài de, wǒ cuò le, nǐ tīng wǒ jiěshì.
☞ ချင်းအိုက်တဲ့ ဝေါ်ဆော့လဲာ့ နီထင်း(င်) ဝေါကျယ်ရှစ်h
☞ သဲကလည်းကွာ၊ ကိုယ်မှားသွားလို့ပါ၊ ကိုယ်ရှင်းပြတာ နားထောင်ပါအုံး။
☞ Jìrán cuò le, nǐ wèi shénme bù shuō duìbùqǐ ne?
☞ ကျိရန်rဆော့လဲာ့ နီ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ပုရှောh တွေ့ပုချီနဲ
☞ မှားမှန်းသိရင်လည်း ဘာလို့ မတောင်းပန်တာလဲ။
B: 好 好 好，对不起。
☞ Hǎo hǎo hǎo, duìbùqǐ.
☞ ဟောင် ဟောင် ဟောင် တွေ့ပုချီ
☞ အေးပါကွာ၊ တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ၊ ဆောရီးနော်။
☞ Nǐ yǐwéi yí jù duìbùqǐ jiù kěyǐ jiějué wèntí le ma?
☞ နီးယီဝေ ယီကျွိတွေ့ပုချီ ကျို့ခဲယ်းယီကျယ်ကျွယ် ဝဲင့်ထီလဲာ့မား
☞ ဆောရီးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ ခိုခို ထင်နေတာလား။
☞ Nà nǐ yào wǒ zěnme bàn? Bù shuō huà ma.
☞ နာ့ နီယောက်ဝေါ် ဇဲင်zမဲာ့ပန့် ပုရှောhဟွာ့မား
☞ ဒါဆို သဲက ကိုယ့်ကို ဘာလုပ်စေချင်တာလဲ။ ကိုယ် ဘာမှ မပြောတော့ဘူးနော်။
☞ Bù xíng, nǐ bìxū gěi wǒ shuō qīngchu.
☞ ပုရှင်(င်) နီပိရွှီးကေးဝေါ် ရှောhချင်း(င်)ချုh
☞ မရဘူး၊ ခိုခို သဲကို ရှင်းအောင်ပြောရမယ်။
☞ Hǎo, wǒ shuō.
☞ ဟောင် ဝေါ်ရှောh
☞ ကောင်းပြီ၊ ကိုယ်ပြောမယ်။
☞ Wǒ bù tīng! Wǒ bù tīng! Wǒ bù tīng!
☞ ဝေါ်ပုထင်း(င်) ဝေါ်ပုထင်း(င်) ဝေါ်ပုထင်း(င်)
☞ ဟင့်အင်း။ နားမထောင်ဘူး။ ဘာမှ လာရှင်းပြမနေနဲ့။
Source : 静静趣味萌芽族
သသှေားမယျ၊ ရှငျသှားမယျ၊ မသမေရှငျ ဖွဈသှားမယျ။
ကိုယျ့ရညျးစား ကောငျမလေးက ရဈနညျးပေါငျးစုံကို တဖကျကမျးခတျနရေငျ...ကဲ..ပွော ... ဘာဆကျလုပျမှာလဲ။
☞ ခငျြးအိုကျတဲ့ ကြိုးhမော့ ယောကျပူယောကျ ခြူးhခြှိဝမျ
☞ ခိုခိုရေ၊ စနေ၊ တနင်ျဂနှမှော လြှောကျလညျကွမလား။
☞ ဟောငျအား နီးရှနျ(ငျ)ခြှိနားလီ
☞ အိုကေ။ သဲ ဘယျသှားခငျြလဲ။
☞ နားလီတိုးဟောငျ ကြီhယောကျ ဟဲယျးနီဇိုကျzယိခြီ
☞ ဘယျဖွဈဖွဈ ရပါတယျ၊ ခိုခိုနဲ့ အတူတူ ရှိနရေငျ ပွီးရော။
☞ window shopping ထှကျမယျ။
☞ ရဲငျrတော ပူယောကျ
☞ လူမြားတယျ၊ မသှားဘူး။
☞ ခြှိကုံး(ငျ)ယှမျ ဟှားခြှမျh
☞ ပနျးခွံသှားပွီး လှစေီးမယျ။
☞ ဟောငျရှိုကျh ပူယောကျ
☞ နအေရမျးပူတယျ၊ မသှားဘူး။
☞ ဟောငျဝူးလြောငျ ပူယောကျ
☞ ပငျြးစရာကွီး၊ မသှားဘူး။
☞ ခြှိ ဖာရှနျးh
☞ ဟောငျလေ့ ပူယောကျ
☞ မောတယျ၊ မသှားဘူး။
☞ ခြှိရှနျးh(ငျ)ခနျြh(ငျ) ခြီးhတုံး(ငျ)ရှိ မိုငျယီးဖုf ခနျ့တနျြ့ယငျ(ငျ)
☞ ရှော့ပငျးမောလျသှားပွီး စားကွသောကျကွမယျ၊ အဝတျအစား ဝယျမယျ၊ ရုပျရှငျကွညျ့မယျ။
☞ မဆေဈတိုးရှဈh ကြဲ့hယနျ့(ငျ) ပူယောကျ ပူယောကျ
☞ အမွဲတမျး အဲဒီခညျြးပဲ၊ မသှားဘူး၊ မသှားဘူး။
☞ နာ့ ဝျေါမဲငျ ပုခြူးhခြှိလဲာ့
☞ ဒါဆိုလညျး ဘယျမှ မသှားတော့ဘူးကှာ။
☞ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပုခြူးhခြှိ နီရှဈh ပူအိုကျဝျေါလဲာ့
☞ ဘာလို့ မသှားရမှာလဲ။ ခိုခိုက သဲကို မခဈြတော့ဘူးလား။
☞ ခငျြးအိုကျတဲ့ ဝျေါဇှေ့zအိုကျနီလဲာ့
☞ သဲကလညျး၊ ကိုယျက သဲကို အခဈြဆုံးပါ။
☞ ဝျေါပူရှငျ့ ဝျေါမဲငျ ဖဲငျးfရှိုhပါ့
☞ မယုံဘူး၊ ခိုခိုနဲ့ ပွတျပွီ၊ ဒါပဲ။
☞ ခငျြးအိုကျတဲ့ ဝျေါဆော့လဲာ့ နီထငျး(ငျ) ဝေါကယျြရှဈh
☞ သဲကလညျးကှာ၊ ကိုယျမှားသှားလို့ပါ၊ ကိုယျရှငျးပွတာ နားထောငျပါအုံး။
☞ ကြိရနျrဆော့လဲာ့ နီ ဝရှေဲ့hမဲာ့ပုရှောh တှပေု့ခြီနဲ
☞ မှားမှနျးသိရငျလညျး ဘာလို့ မတောငျးပနျတာလဲ။
☞ ဟောငျ ဟောငျ ဟောငျ တှပေု့ခြီ
☞ အေးပါကှာ၊ တောငျးပနျပါတယျကှာ၊ ဆောရီးနျော။
☞ နီးယီဝေ ယီကြှိတှပေု့ခြီ ကြို့ခဲယျးယီကယျြကြှယျ ဝဲငျ့ထီလဲာ့မား
☞ ဆောရီးတဈခှနျးတညျးနဲ့ ပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးလို့ရတယျလို့ ခိုခို ထငျနတောလား။
☞ နာ့ နီယောကျဝျေါ ဇဲငျzမဲာ့ပနျ့ ပုရှောhဟှာ့မား
☞ ဒါဆို သဲက ကိုယျ့ကို ဘာလုပျစခေငျြတာလဲ။ ကိုယျ ဘာမှ မပွောတော့ဘူးနျော။
☞ ပုရှငျ(ငျ) နီပိရှီးကေးဝျေါ ရှောhခငျြး(ငျ)ခြုh
☞ မရဘူး၊ ခိုခို သဲကို ရှငျးအောငျပွောရမယျ။
☞ ဟောငျ ဝျေါရှောh
☞ ကောငျးပွီ၊ ကိုယျပွောမယျ။
☞ ဝျေါပုထငျး(ငျ) ဝျေါပုထငျး(ငျ) ဝျေါပုထငျး(ငျ)
☞ ဟငျ့အငျး။ နားမထောငျဘူး။ ဘာမှ လာရှငျးပွမနနေဲ့။
ဖဲချပ် သင်္ကေတ ၄ မျိုး။
10:03 AM C-Word , Chinese
ဖဲထုပ်တစ်ထုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဖဲချပ်တွေကို သင်္ကေတလေးမျိုးနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ club | diamond | heart နဲ့ spade တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Club ကို နှစ်မျိုး ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
梅花 méi huā
မေဟွား - Club
三叶草 sān yè cǎo
စန်းယဲ့ဆောင် - Club
Diamond ကို သုံးမျိုး ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
方块 fāng kuài
ဖန်းf(င်)ခွိုက် - Diamond
红方 hóng fāng
ဟုန်(င်)ဖန်းf(င်) - Diamond
钻石 zuàn shí
ဇွမ့်zရှီh - Diamond
Heart ကို နှစ်မျိုး ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
红桃 hóng táo
ဟုန်း(င်)ထောင် - Heart
红心 hóng xīn
ဟုန်(င်)ရှင်း - Heart
Spade ကို နှစ်မျိုး ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
黑桃 hēi táo
ဟေးထောင် - Spade
ကျန့် - Spade
ဖဲခပျြ သင်ျကတေ ၄ မြိုး။
ဖဲတဈထုပျမှာ ပါဝငျတဲ့ ဖဲခပျြတှကေို သင်ျကတေလေးမြိုးနဲ့ ခှဲခွားသတျမှတျထားပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ club | diamond | heart နဲ့ spade တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Club ကို နှဈမြိုး ချေါနိုငျပါတယျ။
မဟှေား - Club
စနျးယဲ့ဆောငျ - Club
Diamond ကို သုံးမြိုး ချေါနိုငျပါတယျ။
ဖနျးf(ငျ)ခှိုကျ - Diamond
ဟုနျ(ငျ)ဖနျးf(ငျ) - Diamond
ဇှမျ့zရှီh - Diamond
Heart ကို နှဈမြိုး ချေါနိုငျပါတယျ။
ဟုနျး(ငျ)ထောငျ - Heart
ဟုနျ(ငျ)ရှငျး - Heart
Spade ကို နှဈမြိုး ချေါနိုငျပါတယျ။
ဟေးထောငျ - Spade
ကနျြ့ - Spade
လစာ - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
9:34 AM C-Word , Chinese
လကုန်တော့မယ်၊ လစာထုတ်ရက် နီးလာပြီဆိုတော့ ပျော်ရပြီပေါ့။ ဒီနေ့တော့ လစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရလေးတွေကို လေ့လာကြပါစို့။
n) 薪水 xīn shuǐ
ရှင်းရွှေh - လစာ
n) 工钱 gōng qián
ကုံး(င်)ချန် - လစာ
n) 工资 gōng zī
ကုံး(င်)ဇီးz - လစာ။ လုပ်ခ
Lǎobǎn yùfù le yí ge yuè de xīnshuǐ gěi tā.
လောင်းပန် ယွိဖုfလဲာ့ ယီကဲာ့ယွဲ့တဲ့ရှင်းရွှေh ကေထား
သူ့ဌေးက သူ့ကို တစ်လစာ ကြိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
Nǐ qīwàng de xīnshuǐ shì duōshao?
နီ ချီးဝမ့်(င်)တဲ့ ရှင်းရွှေh ရှစ်hတောရှောင်h
မင်းရဲ့ မျှော်မှန်းလစာက ဘယ်လောက်လဲ။
年工资 nián gōng zī
နျန်ကုံး(င်)ဇီးz - နှစ်စဉ်လုပ်ခ
月工资 yuè gōng zī
ယွဲ့ကုံး(င်)ဇီးz - လစဉ်လုပ်ခ
周工资 zhōu gōng zī
ကျိုးhကုံး(င်)ဇီးz - အပတ်စဉ်လုပ်ခ
日工资 rì gōng zī
ရွတ်rကုံး(င်)ဇီးz - နေ့စဉ်လုပ်ခ
最低工资 zuì dī gōng zī
ဇွေ့zတီး ကုံး(င်)ဇီးz - အနည်းဆုံးလုပ်ခ
最高工资 zuì gāo gōng zī
ဇွေ့zကောင်း ကုံး(င်)ဇီးz - အများဆုံးလုပ်ခ
计时工资 jì shí gōng zī
ကျိရှီh ကုံး(င်)ဇီးz - အချိန်အလိုက် ပေးသောလုပ်ခ
计件工资 jì jiàn gōng zī
ကျိကျန့် ကုံး(င်)ဇီးz - ပစ္စည်းအရေအတွက်အလိုက် ပေးသောလုပ်ခ
工资水平 gōng zī shuǐ píng
ကုံး(င်)ဇီးz ရွှေhဖျင်(င်) - လုပ်ခအဆင့်အတန်း
工资标准 gōng zī biāo zhǔn
ကုံး(င်)ဇီးz ပြောင်းကျွင်h - လုပ်ခပုံစံ
工资级别 gōng zī jí bié
ကုံး(င်)ဇီးz ကျီးပြယ် - လုပ်ခနှုန်း
平均工资 píng jūn gōng zī
ဖျင်(င်)ကျွင်း ကုံး(င်)ဇီးz - ပျမ်းမျှလုပ်ခ
全薪 quán xīn
ချွမ်ရှင်း - လစာပြည့်
半薪 bàn xīn
ပန့်ရှင်း - လစာဝက်
奖金 jiǎng jīn
ကျန်(င်)ကျင်း - ဘောနပ်စ်
夜班津贴 yè bān jīn tiē
ယဲ့ပန်း ကျင်းထျဲ - ညဆိုင်း ရှားပါးစရိတ်
加班费 jiā bān fèi
ကျားပန်းဖေ့f - အချိန်ပိုလုပ်ခ
加班工资 jiā bān gōng zī
ကျားပန်း ကုံး(င်)ဇီးz - အချိန်ပိုလုပ်ခ
附加工资 fù jiā gōng zī
ဖုfကျား ကုံး(င်)ဇီးz - အပိုလုပ်ခ
保留工资 bǎo liú gōng zī
ပေါင်လျို ကုံး(င်)ဇီးz - ခြွင်းချန်ထားသော လုပ်ခ
年薪制 nián xīn zhì
နျန်ရှင်းကျိh - တစ်နှစ်တာ လုပ်ခ
工龄 gōng líng
ကုံး(င်)လင်(င်) - လုပ်သက်။ အမှုထမ်းသက်
加工资 jiā gōng zī
ကျား ကုံး(င်)ဇီးz - လုပ်ခတိုးသည်
工资袋 gōng zī dài
ကုံး(င်)ဇီးzတိုက် - လုပ်ခငွေ စာအိတ်
工资单 gōng zī dān
ကုံး(င်)ဇီးzတန်း - လုပ်ခစာရင်း
工资率 gōng zī lǜ
ကုံး(င်)ဇီးzလွိ - လုပ်ခနှုန်း
退休金 tuì xiū jīn
ထွေ့ရှိုးကျင်း - အငြိမ်းစားလစာ။ ပင်စင်
补助费 bǔ zhù fèi
ပူကျုhဖေ့f - ထောက်ပံ့ကြေး
保健费 bǎo jiàn fèi
ပေါင်ကျန့်ဖေ့f - ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့ကြေး
住房补贴 zhù fáng bǔ tiē
ကျုhဖန်f(င်) ပူထျဲ - နေအိမ် ထောက်ပံ့ကြေး
待遇 dài yù
တိုက်ယွိ - အကျိုးခံစားခွင့်
外快 wài kuài
ဝိုက်ခွိုက် - အပိုဝင်ငွေ။ အောက်ဆိုက်
收入 shōu rù
ရှိုးhရုr - ဝင်ငွေ
支出 zhī chū
ကျီးhချူးh - ထွက်ငွေ
လစာ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
လကုနျတော့မယျ၊ လစာထုတျရကျ နီးလာပွီဆိုတော့ ပြျောရပွီပေါ့။ ဒီနတေ့ော့ လစာနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဝေါဟာရလေးတှကေို လလေ့ာကွပါစို့။
ရှငျးရှေh - လစာ
ကုံး(ငျ)ခနျြ - လစာ
ကုံး(ငျ)ဇီးz - လစာ။ လုပျခ
လောငျးပနျ ယှိဖုfလဲာ့ ယီကဲာ့ယှဲ့တဲ့ရှငျးရှေh ကထေား
သူ့ဌေးက သူ့ကို တဈလစာ ကွိုထုတျပေးလိုကျတယျ။
နီ ခြီးဝမျ့(ငျ)တဲ့ ရှငျးရှေh ရှဈhတောရှောငျh
မငျးရဲ့ မြှျောမှနျးလစာက ဘယျလောကျလဲ။
နနျြကုံး(ငျ)ဇီးz - နှဈစဉျလုပျခ
ယှဲ့ကုံး(ငျ)ဇီးz - လစဉျလုပျခ
ကြိုးhကုံး(ငျ)ဇီးz - အပတျစဉျလုပျခ
ရှတျrကုံး(ငျ)ဇီးz - နစေ့ဉျလုပျခ
ဇှေ့zတီး ကုံး(ငျ)ဇီးz - အနညျးဆုံးလုပျခ
ဇှေ့zကောငျး ကုံး(ငျ)ဇီးz - အမြားဆုံးလုပျခ
ကြိရှီh ကုံး(ငျ)ဇီးz - အခြိနျအလိုကျ ပေးသောလုပျခ
ကြိကနျြ့ ကုံး(ငျ)ဇီးz - ပစ်စညျးအရအေတှကျအလိုကျ ပေးသောလုပျခ
ကုံး(ငျ)ဇီးz ရှေhဖငျြ(ငျ) - လုပျခအဆငျ့အတနျး
ကုံး(ငျ)ဇီးz ပွောငျးကြှငျh - လုပျခပုံစံ
ကုံး(ငျ)ဇီးz ကြီးပွယျ - လုပျခနှုနျး
ဖငျြ(ငျ)ကြှငျး ကုံး(ငျ)ဇီးz - ပမျြးမြှလုပျခ
ခြှမျရှငျး - လစာပွညျ့
ပနျ့ရှငျး - လစာဝကျ
ကနျြ(ငျ)ကငျြး - ဘောနပျဈ
ယဲ့ပနျး ကငျြးထြဲ - ညဆိုငျး ရှားပါးစရိတျ
ကြားပနျးဖေ့f - အခြိနျပိုလုပျခ
ကြားပနျး ကုံး(ငျ)ဇီးz - အခြိနျပိုလုပျခ
ဖုfကြား ကုံး(ငျ)ဇီးz - အပိုလုပျခ
ပေါငျလြို ကုံး(ငျ)ဇီးz - ခွှငျးခနျြထားသော လုပျခ
နနျြရှငျးကြိh - တဈနှဈတာ လုပျခ
ကုံး(ငျ)လငျ(ငျ) - လုပျသကျ။ အမှုထမျးသကျ
ကြား ကုံး(ငျ)ဇီးz - လုပျခတိုးသညျ
ကုံး(ငျ)ဇီးzတိုကျ - လုပျခငှေ စာအိတျ
ကုံး(ငျ)ဇီးzတနျး - လုပျခစာရငျး
ကုံး(ငျ)ဇီးzလှိ - လုပျခနှုနျး
ထှရှေို့းကငျြး - အငွိမျးစားလစာ။ ပငျစငျ
ပူကြုhဖေ့f - ထောကျပံ့ကွေး
ပေါငျကနျြ့ဖေ့f - ကနျြးမာရေး ထောကျပံ့ကွေး
ကြုhဖနျf(ငျ) ပူထြဲ - နအေိမျ ထောကျပံ့ကွေး
တိုကျယှိ - အကြိုးခံစားခှငျ့
ဝိုကျခှိုကျ - အပိုဝငျငှေ။ အောကျဆိုကျ
ရှိုးhရုr - ဝငျငှေ
ကြီးhခြူးh - ထှကျငှေ
ပုဒ်ဖြတ်၊ ပုဒ်ရပ် သင်္ကေတများ။
8:58 AM C-Word , Chinese
တရုတ်ဘာသာရှိ ပုဒ်ဖြတ်၊ ပုဒ်ရပ် သင်္ကေတများနှင့် ၄င်းတို့၏ အခေါ်အဝေါ်များကို ဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။
。句号 jù hào
ကျွိဟောက် - fullstop
， 逗号 dòu hào
တို့ဟောက် - comma
、顿号 dùn hào
တွင့်ဟောက် - slight-pause mark
！叹号 tàn hào
ထန့်ဟောက် - exclamation mark
？问号 wèn hào
ဝဲင့်ဟောက် - question mark
；分号 fēn hào
ဖဲင်းfဟောက် - semicolon
：冒号 mào hào
မောက်ဟောက် - colon
『』引号 yǐn hào
ယင်ဟောက် - quotation mark
= 等号 děng hào
တဲင်(င်)ဟောက် - equation
…… 省略号 shěng lüè hào
ရှဲင်h(င်)လျွဲ့ဟောက် - and so on
～ 代字号 dài zì hào
တိုက်ဇစ်zဟောက် - swung dash
/ 斜线号 xié xiàn hào
ရှယ်ရှန့်ဟောက် - slant
‖ 平行号 píng xíng hào
ဖျင်း(င်)ရှင်(င်)ဟောက် - parallels
→ 箭号 jiàn hào
ကျန့်ဟောက် - arrow
ပုဒျဖွတျ၊ ပုဒျရပျ သင်ျကတေမြား။
တရုတျဘာသာရှိ ပုဒျဖွတျ၊ ပုဒျရပျ သင်ျကတေမြားနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ အချေါအဝျေါမြားကို ဆကျလကျလလေ့ာကွပါစို့။
ကြှိဟောကျ - fullstop
，逗号 dòu hào
တို့ဟောကျ - comma
တှငျ့ဟောကျ - slight-pause mark
ထနျ့ဟောကျ - exclamation mark
ဝဲငျ့ဟောကျ - question mark
ဖဲငျးfဟောကျ - semicolon
မောကျဟောကျ - colon
ယငျဟောကျ - quotation mark
တဲငျ(ငျ)ဟောကျ - equation
ရှဲငျh(ငျ)လြှဲ့ဟောကျ - and so on
တိုကျဇဈzဟောကျ - swung dash
ရှယျရှနျ့ဟောကျ - slant
ဖငျြး(ငျ)ရှငျ(ငျ)ဟောကျ - parallels
ကနျြ့ဟောကျ - arrow
ပုဒ်ဖြတ် - ပုဒ်ရပ် - ပုဒ်ဖြတ် ပုဒ်ရပ် - ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ် - ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်သင်္ကေတ - ပုဒျဖွတျ - ပုဒျရပျ - ပုဒျဖွတျ ပုဒျရပျ - ပုဒျဖွတျပုဒျရပျ - ပုဒျဖွတျပုဒျရပျသင်ျကတေ - Punctuation - punctuation
ဂျိုကာ ဖဲချပ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
8:38 AM C-Word , Chinese
ဖဲထုပ်တစ်ထုပ်မှာ Joker - ဂျိုကာ နှစ်မျိုးပါပါတယ်။ ကာလာ ဂျိုကာနဲ့ အဖြူအမည်း ဂျိုကာပါ။
鬼牌 guǐ pái
ကွေဖိုင် - ဂျိုကာ
王牌 wáng pái
ဝမ်း(င်)ဖိုင် - ဂျိုကာ
大小王 dà xiǎo wáng
တာ့ရှောင်ဝမ်(င်) - ဂျိုကာ
百搭 bǎi dā
ပိုင်တား - ဂျိုကာ
大王 dà wáng
တာ့ဝမ်(င်) - ရောင်စုံ ဂျိုကာ
小王 xiǎo wáng
ရှောင်ဝမ်(င်) - အဖြူအမည်း ဂျိုကာ
大百搭 dà bǎi dā
တာ့ပိုင်တား - ရောင်စုံ ဂျိုကာ
小百搭 xiǎo bǎi dā
ရှောင်းပိုင်တား - အဖြူအမည်း ဂျိုကာ
ဂြိုကာ ဖဲခပျြ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
ဖဲထုပျတဈထုပျမှာ Joker - ဂြိုကာ နှဈမြိုးပါပါတယျ။ ကာလာ ဂြိုကာနဲ့ အဖွူအမညျး ဂြိုကာပါ။
ကှဖေိုငျ - ဂြိုကာ
ဝမျး(ငျ)ဖိုငျ - ဂြိုကာ
တာ့ရှောငျဝမျ(ငျ) - ဂြိုကာ
ပိုငျတား - ဂြိုကာ
တာ့ဝမျ(ငျ) - ရောငျစုံ ဂြိုကာ
ရှောငျဝမျ(ငျ) - အဖွူအမညျး ဂြိုကာ
တာ့ပိုငျတား - ရောငျစုံ ဂြိုကာ
ရှောငျးပိုငျတား - အဖွူအမညျး ဂြိုကာ
苏州 Sū zhōu ကိန်းဂဏန်းများ။
10:40 AM C-Word , Chinese
苏州 Sū zhōu ဆိုတာ 江苏 Jiāng sū ပြည်နယ်က မြို့တစ်ခုပါ။ ဒီမြို့မှာ သုံးတဲ့ ၁၊ ၂၊ ၃ ဂဏန်း ရေးနည်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ 一、二、三နဲ့ ရေးပုံမတူညီပါဘူး။
苏州 Sū zhōu မြို့မှာ ရေးသားသုံးစွဲတဲ့ တရုတ် ကိန်းဂဏန်းတွေကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ယီး - တစ်
အဲာ့r - နှစ်
စန်း - သုံး
စွတ် - လေး
ဝူ - ငါး
လျို့ - ခြောက်
ချီး - ခုနစ်
ပါး - ရှစ်
ကျို - ကိုး
ရှီh - တစ်ဆယ်
★ ဆက်စပ် လေ့လာရန်
ငွေကြေးတွေကို ရေတွက်တဲ့အခါ ဒီသင်္ကေတ △ ကတော့角 jiǎo - ပြား အတွက် အသုံးပြုပြီး၊ ဒီသင်္ကေတ ○ ကတော့ 元 yuán - ကျပ် အတွက် အသုံးပြုတာပါ။
၅၉ ပြား 5角9分 ကို 〥〩 △ လို့ ရေးသားပါတယ်။
၅ ကျပ် ပြား ၈၀ 5元8角 ကို 〥〨 ○ လို့ ရေးပါတယ်။
၃၉၀၈ ယွမ် 3908元 ကို 〣〩0〨 千 လို့ ရေးပါတယ်။
၇၈၉ ကို 〧〨〩 百 လို့ ရေးပါတယ်။
၂၁၃၄ ကို 〢一〣〤 千 လို့ ရေးကြပါတယ်။
苏州 Sū zhōu ကိနျးဂဏနျးမြား။
苏州 Sū zhōu ဆိုတာ 江苏 Jiāng sū ပွညျနယျက မွို့တဈခုပါ။ ဒီမွို့မှာ သုံးတဲ့ ၁၊ ၂၊ ၃ ဂဏနျး ရေးနညျးတှဟော ကြှနျတျောတို့ သငျခဲ့ဖူးတဲ့ 一、二、三နဲ့ ရေးပုံမတူညီပါဘူး။
苏州 Sū zhōu မွို့မှာ ရေးသားသုံးစှဲတဲ့ တရုတျ ကိနျးဂဏနျးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့။
ယီး - တဈ
အဲာ့r - နှဈ
စနျး - သုံး
စှတျ - လေး
လြို့ - ခွောကျ
ခြီး - ခုနဈ
ပါး - ရှဈ
ကြို - ကိုး
ရှီh - တဈဆယျ
★ ဆကျစပျ လလေ့ာရနျ
ငှကွေေးတှကေို ရတှေကျတဲ့အခါ ဒီသင်ျကတေ △ ကတော့角 jiǎo - ပွား အတှကျ အသုံးပွုပွီး၊ ဒီသင်ျကတေ ○ ကတော့ 元 yuán - ကပျြ အတှကျ အသုံးပွုတာပါ။
၅၉ ပွား 5角9分 ကို 〥〩 △ လို့ ရေးသားပါတယျ။
၅ ကပျြ ပွား ၈၀ 5元8角 ကို 〥〨 ○ လို့ ရေးပါတယျ။
၃၉၀၈ ယှမျ 3908元 ကို 〣〩0〨 千 လို့ ရေးပါတယျ။
၇၈၉ ကို 〧〨〩 百 လို့ ရေးပါတယျ။
၂၁၃၄ ကို 〢一〣〤 千 လို့ ရေးကွပါတယျ။
ဖဲထုပ်ထဲက J Q K ရဲ့ နာမည်များ။
10:26 AM C-Word , Chinese
ဖဲထုပ်တစ်ထုပ်မှာ J - Jack လေးချပ်၊ Q - Queen လေးချပ်နဲ့ K - King လေးချပ်ပါပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နာမည်တွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် လေ့လာကြည့်ပါ။
☞ K - King လေးချပ် အမည်များ
黑桃大卫 hēi táo dà wèi
ဟေးထောင် တာ့ဝေ့ - Spade K
红桃查理 hóng táo chá lǐ
ဟုန်း(င်)ထောင် ချားhလီ - Heart K
梅花亚历山大 méi huā yà lì shān dà
မေဟွား ယာ့လိရှန်းhတာ့ - Club K
方块凯撒 fāng kuài kǎi sǎ
ဖန်းf(င်)ခွိုက် ခိုင်းစာ - Diamond K
☞ Q - Queen လေးချပ် အမည်များ
黑桃帕拉斯 hēi táo pà lā sī
ဟေးထောင် ဖာ့လားစီး - Spade Q
红桃朱迪思 hóng táo zhū dí sī
ဟုန်း(င်)ထောင် ကျူးhတီစီး - Heart Q
梅花阿金尼 méi huā ā jīn ní
မေဟွား အားကျင်းနီ - Club Q
方块雷切尔 fāng kuài léi qiè ěr
ဖန်းf(င်)ခွိုက် လေချဲ့အဲယ်r - Diamond Q
☞ J - Jack လေးချပ် အမည်များ
黑桃霍吉尔 hēi táo huò jí ěr
ဟေးထောင် ဟော့ကျီးအဲယ်r - Spade J
红桃拉海尔 hóng táo lā hǎi ěr
ဟုန်း(င်)ထောင် လားဟိုင်းအဲယ်r - Heart J
梅花兰斯洛待 méi huā lán sī luò dài
မေဟွား လန်စီးလော့တိုက် - Club J
方块赫克托 fāng kuài hè kè tuō
ဖန်းf(င်)ခွိုက် ဟဲာ့ခဲါ့ထော - Diamond J
ဖဲထုပျထဲက J Q K ရဲ့ နာမညျမြား။
ဖဲထုပျတဈထုပျမှာ J - Jack လေးခပျြ၊ Q - Queen လေးခပျြနဲ့ K - King လေးခပျြပါပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ နာမညျတှကေို ဗဟုသုတအဖွဈ လလေ့ာကွညျ့ပါ။
☞ K - King လေးခပျြ အမညျမြား
ဟေးထောငျ တာ့ဝေ့ - Spade K
ဟုနျး(ငျ)ထောငျ ခြားhလီ - Heart K
မဟှေား ယာ့လိရှနျးhတာ့ - Club K
ဖနျးf(ငျ)ခှိုကျ ခိုငျးစာ - Diamond K
☞ Q - Queen လေးခပျြ အမညျမြား
ဟေးထောငျ ဖာ့လားစီး - Spade Q
ဟုနျး(ငျ)ထောငျ ကြူးhတီစီး - Heart Q
မဟှေား အားကငျြးနီ - Club Q
ဖနျးf(ငျ)ခှိုကျ လခြေဲ့အဲယျr - Diamond Q
☞ J - Jack လေးခပျြ အမညျမြား
ဟေးထောငျ ဟော့ကြီးအဲယျr - Spade J
ဟုနျး(ငျ)ထောငျ လားဟိုငျးအဲယျr - Heart J
မဟှေား လနျစီးလော့တိုကျ - Club J
ဖနျးf(ငျ)ခှိုကျ ဟဲာ့ခဲါ့ထော - Diamond J
10:04 AM C-Word , Chinese
စက်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီစသည်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပြောဆိုဆက်ဆံကြတဲ့အခါ ဒီလို ဝေါဟာရလေးတွေကလည်း မသိမဖြစ် လိုအပ်လာပြန်တယ်လေ။
请假 qǐng jià
ချင်(င်)ကျာ့ - ခွင့်ယူသည်
旷工 kuàng gōng
ခွမ့်(င်)ကုံး(င်) - ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခြင်း
病假 bìng jià
ပျင့်(င်)ကျာ့ - ဖျားနာခွင့်
病假条 bìng jià tiáo
ပျင့်(င်)ကျာ့ထျောင် - ဆေးခွင့်စာ
婚假 hūn jià
ဟွင်းကျာ့ - လက်ထပ်ခွင့်ရက်
产假 chǎn jià
ချန်hကျာ့ - မီးဖွားခွင့်ရက်
事假 shì jià
ရှစ်hကျာ့ - ရှောင်တခင်ခွင့်
工伤 gōng shāng
ကုံး(င်)ရှန်းh(င်) - အလုပ်ခွင်မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
上班 shàng bān
ရှန့်h(င်)ပန်း - အလုပ်တက်သည်
下班 xià bān
ရှာ့ပန်း - အလုပ်ဆင်းသည်
白班 bái bān
ပိုင်ပန်း - နေ့ဆိုင်း
早班 zǎo bān
ဇောင်zပန်း - မနက်ဆိုင်း
中班 zhōng bān
ကျုံးh(င်)ပန်း - နေ့လည်ဆိုင်း
夜班 yè bān
ယဲ့ပန်း - ညဆိုင်း
加班 jiā bān
ကျားပန်း - အချိန်ပိုဆင်းသည်
双休日 shuāng xiū rì
ရွှမ်းh(င်)ရှိုးရွတ်r - စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်
စကျရုံ၊ ကုမ်ပဏီစသညျဖွငျ့ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ပွောဆိုဆကျဆံကွတဲ့အခါ ဒီလို ဝေါဟာရလေးတှကေလညျး မသိမဖွဈ လိုအပျလာပွနျတယျလေ။
ခငျြ(ငျ)ကြာ့ - ခှငျ့ယူသညျ
ခှမျ့(ငျ)ကုံး(ငျ) - ခှငျ့မဲ့ပကျြကှကျခွငျး
ပငျြ့(ငျ)ကြာ့ - ဖြားနာခှငျ့
ပငျြ့(ငျ)ကြာ့ထြောငျ - ဆေးခှငျ့စာ
ဟှငျးကြာ့ - လကျထပျခှငျ့ရကျ
ခနျြhကြာ့ - မီးဖှားခှငျ့ရကျ
ရှဈhကြာ့ - ရှောငျတခငျခှငျ့
ကုံး(ငျ)ရှနျးh(ငျ) - အလုပျခှငျမတျောတဆ ထိခိုကျဒဏျရာရခွငျး
ရှနျ့h(ငျ)ပနျး - အလုပျတကျသညျ
ရှာ့ပနျး - အလုပျဆငျးသညျ
ပိုငျပနျး - နဆေို့ငျး
ဇောငျzပနျး - မနကျဆိုငျး
ကြုံးh(ငျ)ပနျး - နလေ့ညျဆိုငျး
ယဲ့ပနျး - ညဆိုငျး
ကြားပနျး - အခြိနျပိုဆငျးသညျ
ရှမျးh(ငျ)ရှိုးရှတျr - စနေ၊ တနင်ျဂနှေ အားလပျရကျ
Posted by - Khin Khin Hla
9:47 AM C-Word , Chinese
လေယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရများကို လေ့လာနိုင်စေရန် တင်ပေးထားပါသည်။ လိုအပ်သူများ ကျက်မှတ်ကြပါ။
航空 háng kōng
ဟန်(င်)ခုံး(င်) - လေကြောင်း။ လေကြောင်းသွားလာရေး
ဖေးfကျီး - လေယာဉ်
运输机 yùn shū jī
ယွင့်ရှူးhကျီး - သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်
喷气机 pēn qì jī
ဖဲင်းချိကျီး - ဂျက်လေယာဉ်
教练机 jiào liàn jī
ကျောက်လျန့်ကျီး - အမောင်းသင်လေယာဉ်
水上飞机 shuǐ shàng fēi jī
ရွှေhရှန့်h(င်) ဖေးfကျီး - ရေယာဉ်ပျံ။ ဟိုက်ဒရိုလေယာဉ်
轻型飞机 qīng xíng fēi jī
ချင်း(င်)ရှင်(င်) ဖေးfကျီး - အပေါ့စား လေယာဉ်
直升飞机 zhí shēng fēi jī
ကျီhရှဲင်းh(င်)ဖေးfကျီး - ဟယ်လီကော်ပတာ။ ရဟတ်ယာဉ်
单翼飞机 dān yì fēi jī
တန်းယိ ဖေးfကျီး - အတောင်တစ်ထပ် လေယာဉ်
双翼飞机 shuāng yì fēi jī
ရွှမ်းh(င်)ယိ ဖေးfကျီး - အတောင်နှစ်ထပ် လေယာဉ်
波音式飞机 bō yīn shì fēi jī
ပေါယင်းရှစ်h ဖေးfကျီး - ဘိုးရင်းလေယာဉ်
协和式飞机 xié hé shì fēi jī
ရှဲဟဲယ်ရှစ်h ဖေးfကျီး - ကွန်းကော့ဒ် လေယာဉ်
高超音速飞机 gāo chāo yīn sù fēi jī
ကောင်းချောင်းhယင်းစုဖေးfကျီး - အသံထက် အလွန့်အလွန်မြန်သော လေယာဉ်
超音速飞机 chāo yīn sù fēi jī
ချောင်းhယင်းစု ဖေးfကျီး - အသံထက်မြန် လေယာဉ်
三叉戟式飞机 sān chā jǐ shì fēi jī
စန်းချားhကျီရှစ်h ဖေးfကျီး - ထရိုင်ဒင့် ဂျက်လေယာဉ်
水陆两用飞机 shuǐ lù liǎng yòng fēi jī
ရွှေhလုလျန်(င်)ယုံ့(င်) ဖေးfကျီး - ကုန်းရေနှစ်ထွေသုံး လေယာဉ်
客机 kè jī
ခဲါ့ကျီး - ခရီးသည်တင်လေယာဉ်
大客机 dà kè jī
တာ့ခဲါ့ကျီး - အကြီးစား ခရီးသည်တင်လေယာဉ်
普通飞机 pǔ tōng fēi jī
ဖူထုံး(င်) ဖေးfကျီး - ရိုးရိုး ခရီးသည်တင်လေယာဉ်
喷气式客机 pēn qì shì kè jī
ဖဲင်းချိရှစ်h ခဲါ့ကျီး - ခရီးသည်တင် ဂျက်လေယာဉ်
豪华大型客机 háo huá dà xíng kè jī
ဟောင်းဟွာ တာ့ရှင်(င်)ခဲါ့ကျီး - ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ခရီးသည်တင်လေယာဉ်
班机 bān jī
ပန်းကျီး - ခရီးစဉ်သွားမြဲလေယာဉ်
民用航空 mín yòng háng kōng
မျင်ယုံ့(င်)ဟန်(င်)ခုံး(င်) - မြို့ပြလေကြောင်း
航空公司 háng kōng gōng sī
ဟန်(င်)ခုံး(င်)ကုံး(င်)စီး - လေကြောင်းကုမ္ပဏီ
空中客车 kōng zhōng kè chē
ခုံး(င်)ကျုံးh(င်)ခဲါ့ချဲh - စကိုင်းဘတ်စ်
空中巴士 kōng zhōng bā shì
ခုံး(င်)ကျုံးh(င်)ပါးရှစ်h - အဲယားဘတ်စ်
货运班机 huò yùn bān jī
ဟော့ယွင့်ပန်းကျီး - ကုန်တင်လေယာဉ်
定期航班 dìng qī háng bān
တင့်(င်)ချီးဟန်(င်)ပန်း - ပုံမှန်ပျံသန်းမှု
活动座椅 huó dòng zuò yǐ
ဟော်တုံ့(င်)ဇော့zယီ - ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ထိုင်ခုံ
弹射座椅 tán shè zuò yǐ
ထန်ရှဲ့hဇော့zယီ - ထုတ်ပစ်နိုင်သော ထိုင်ခုံ
靠窗座位 kào chuāng zuò wèi
ခေါက်ချွမ်းh(င်) ဇော့zဝေ့ - ပြတင်းပေါက်နားရှိ ထိုင်ခုံ
自动扶梯 zì dòng fú tī
ဇစ်zတုံ့(င်)ဖူfထီး - လက်ရန်းပါ အော်တိုမက်တစ်လှေကား
氧气面罩 yǎng qì miàn zhào
ယန်(င်)ချိမြန့်ကျောက်h - အောက်ဆီဂျင်မျက်နှာဖုံး
救生背心 jiù shēng bèi xīn
ကျို့ရှဲင်းh(င်) ပေ့ရှင်း - အသက်ကယ်အင်္ကျီ
救生背带 jiù shēng bèi dài
ကျို့ရှဲင်းh(င်) ပေ့တိုက် - အသက်ကယ်သိုင်းကြိုး
巡航速度 xún háng sù dù
ရွှင်းဟန်(င်)စုတု - မှန်မှန်မောင်းသည့်အရှိန်
最高速度 zuì gāo sù dù
ဇွေ့zကောင်းစုတု - အမြင့်ဆုံးအရှိန်
紧急降落 jǐn jí jiàng luò
ကျင်ကျီကျန့်(င်)လော့ - အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခြင်း
လယောဉျနှငျ့ ပတျသကျသော ဝေါဟာရမြားကို လလေ့ာနိုငျစရေနျ တငျပေးထားပါသညျ။ လိုအပျသူမြား ကကျြမှတျကွပါ။
ဟနျ(ငျ)ခုံး(ငျ) - လကွေောငျး။ လကွေောငျးသှားလာရေး
ဖေးfကြီး - လယောဉျ
ယှငျ့ရှူးhကြီး - သယျယူပို့ဆောငျရေးလယောဉျ
ဖဲငျးခြိကြီး - ဂကျြလယောဉျ
ကြောကျလနျြ့ကြီး - အမောငျးသငျလယောဉျ
ရှေhရှနျ့h(ငျ) ဖေးfကြီး - ရယောဉျပြံ။ ဟိုကျဒရိုလယောဉျ
ခငျြး(ငျ)ရှငျ(ငျ) ဖေးfကြီး - အပေါ့စား လယောဉျ
ကြီhရှဲငျးh(ငျ)ဖေးfကြီး - ဟယျလီကျောပတာ။ ရဟတျယာဉျ
တနျးယိ ဖေးfကြီး - အတောငျတဈထပျ လယောဉျ
ရှမျးh(ငျ)ယိ ဖေးfကြီး - အတောငျနှဈထပျ လယောဉျ
ပေါယငျးရှဈh ဖေးfကြီး - ဘိုးရငျးလယောဉျ
ရှဲဟဲယျရှဈh ဖေးfကြီး - ကှနျးကော့ဒျ လယောဉျ
ကောငျးခြောငျးhယငျးစုဖေးfကြီး - အသံထကျ အလှနျ့အလှနျမွနျသော လယောဉျ
ခြောငျးhယငျးစု ဖေးfကြီး - အသံထကျမွနျ လယောဉျ
စနျးခြားhကြီရှဈh ဖေးfကြီး - ထရိုငျဒငျ့ ဂကျြလယောဉျ
ရှေhလုလနျြ(ငျ)ယုံ့(ငျ) ဖေးfကြီး - ကုနျးရနှေဈထှသေုံး လယောဉျ
ခဲါ့ကြီး - ခရီးသညျတငျလယောဉျ
တာ့ခဲါ့ကြီး - အကွီးစား ခရီးသညျတငျလယောဉျ
ဖူထုံး(ငျ) ဖေးfကြီး - ရိုးရိုး ခရီးသညျတငျလယောဉျ
ဖဲငျးခြိရှဈh ခဲါ့ကြီး - ခရီးသညျတငျ ဂကျြလယောဉျ
ဟောငျးဟှာ တာ့ရှငျ(ငျ)ခဲါ့ကြီး - ကွီးကယျြခမျးနားသော ခရီးသညျတငျလယောဉျ
ပနျးကြီး - ခရီးစဉျသှားမွဲလယောဉျ
မငျြယုံ့(ငျ)ဟနျ(ငျ)ခုံး(ငျ) - မွို့ပွလကွေောငျး
ဟနျ(ငျ)ခုံး(ငျ)ကုံး(ငျ)စီး - လကွေောငျးကုမ်ပဏီ
ခုံး(ငျ)ကြုံးh(ငျ)ခဲါ့ခြဲh - စကိုငျးဘတျဈ
ခုံး(ငျ)ကြုံးh(ငျ)ပါးရှဈh - အဲယားဘတျဈ
ဟော့ယှငျ့ပနျးကြီး - ကုနျတငျလယောဉျ
တငျ့(ငျ)ခြီးဟနျ(ငျ)ပနျး - ပုံမှနျပြံသနျးမှု
ဟျောတုံ့(ငျ)ဇော့zယီ - ရှပွေ့ောငျးနိုငျသော ထိုငျခုံ
ထနျရှဲ့hဇော့zယီ - ထုတျပဈနိုငျသော ထိုငျခုံ
ခေါကျခြှမျးh(ငျ) ဇော့zဝေ့ - ပွတငျးပေါကျနားရှိ ထိုငျခုံ
ဇဈzတုံ့(ငျ)ဖူfထီး - လကျရနျးပါ အျောတိုမကျတဈလှကေား
ယနျ(ငျ)ခြိမွနျ့ကြောကျh - အောကျဆီဂငျြမကျြနှာဖုံး
ကြို့ရှဲငျးh(ငျ) ပရှေ့ငျး - အသကျကယျအကငြ်္ီ
ကြို့ရှဲငျးh(ငျ) ပတေို့ကျ - အသကျကယျသိုငျးကွိုး
ရှငျးဟနျ(ငျ)စုတု - မှနျမှနျမောငျးသညျ့အရှိနျ
ဇှေ့zကောငျးစုတု - အမွငျ့ဆုံးအရှိနျ
ကငျြကြီကနျြ့(ငျ)လော့ - အရေးပျေါ ဆငျးသကျခွငျး
9:27 AM C-Word , Chinese
တန်ဖိုးကြီး အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများကို လေ့လာကြည့်ပါအုံး။
ရှန့်(င်)လျန့်ကျွေ့h - ဆွဲသီး
念珠 niàn zhū
နျန့်ကျူးh - ပုတီး
钥匙圈 yào shì quān
ယောက်ရှစ်hချွမ်းh - ကီးချိန်း
ဇွမ့်zရှီh - စိန်
橄榄石 gǎn lǎn shí
ကန်းလန်ရှီh - ပြောင်ခေါင်းစိမ်း
紫晶 zǐ jīng
ဇီzကျင်း(င်) - ခရမ်းစွဲ
紫石英 zǐ shí yīng
ဇီzရှီhယင်း(င်) - ခရမ်းကျောက်
摩谷翡翠 Mó gǔ fěi cuì
မောကူ ဖေfဆွေ့ - မိုးကုတ်မြ
黑玉 hēi yù
ဟေးယွိ - ကျောက်စိမ်းနက်
黄水晶 huáng shuǐ jīng
ဟွမ်း(င်)ရွှေhကျင်း(င်) - စလင်းဝါ
碧玉 bì yù
ပိယွိ - နဂါးသွဲ့
石英 shí yīng
ရှီhယင်း(င်) - စလင်း
黄玉 huáng yù
ဟွမ်(င်)ယွိ - ထပ်တရာ
珊瑚 shān hú
ရှန်းhဟူ - သန္တာ
锆石 gào shí
ကောက်ရှီh - ဂေါ်မိတ်
琥珀 hú pò
ဟူဖော့ - ပယင်း
绿矾 lǜ fán
လွိဖန်f - ပါလဒုတ္တာ
猫眼石 māo yín shí
မောင်းယင်းရှီh - ကြောင်မျက်လုံး
绿松石 lǜ sōng shí
လွိစုန်း(င်)ရှီh - တာကွိုက်ကျောက်
尖晶石 jiān jīng shí
ကျန်းကျင်း(င်)ရှီh - အညံ့ပန်း
镀金的 dù jīn de
တုကျင်းတဲ့ - ရွှေရည်စိမ်
水晶 shuǐ jīng
ရွှေhကျင်း(င်) - ခရစ္စတယ်
碧玺 bì xǐ
ပိရှီ - ဖရဲအူ
石榴石 shí liú shí
ရှီးhလျိုးရှီh - ဥဒေါင်။ ဂေါ်မိတ်
白玉 bái yù
ပိုင်ယွိ - ကျောက်စိမ်းဖြူ
青玉 qīng yù
ချင်း(င်)ယွိ - အပြာရောင် ကျောက်နု
金器 jīn qì
ကျင်းချိ - ရွှေထည်
银器 yín qì
ယင်ချိ - ငွေထည်
玉器 yù qì
ယွိချိ - ကျောက်စိမ်းထည်
古币 gǔ bì
ကူပိ - ရှေးဟောင်းဒင်္ဂါး
水色 shuǐ sè
ရွှေhစဲ့ - ကျောက်အရည်
တနျဖိုးကွီး အလှဆငျပစ်စညျးတှေ ဖွဈကွတဲ့ ကြောကျမကျြရတနာဆိုငျရာ ဝေါဟာရမြားကို လလေ့ာကွညျ့ပါအုံး။
နနျြ့ကြူးh - ပုတီး
ယောကျရှဈhခြှမျးh - ကီးခြိနျး
ဇှမျ့zရှီh - စိနျ
ကနျးလနျရှီh - ပွောငျခေါငျးစိမျး
ဇီzကငျြး(ငျ) - ခရမျးစှဲ
ဇီzရှီhယငျး(ငျ) - ခရမျးကြောကျ
မောကူ ဖေfဆှေ့ - မိုးကုတျမွ
ဟေးယှိ - ကြောကျစိမျးနကျ
ဟှမျး(ငျ)ရှေhကငျြး(ငျ) - စလငျးဝါ
ပိယှိ - နဂါးသှဲ့
ရှီhယငျး(ငျ) - စလငျး
ဟှမျ(ငျ)ယှိ - ထပျတရာ
ရှနျးhဟူ - သန်တာ
ကောကျရှီh - ဂျေါမိတျ
ဟူဖော့ - ပယငျး
လှိဖနျf - ပါလဒုတ်တာ
မောငျးယငျးရှီh - ကွောငျမကျြလုံး
လှိစုနျး(ငျ)ရှီh - တာကှိုကျကြောကျ
ကနျြးကငျြး(ငျ)ရှီh - အညံ့ပနျး
တုကငျြးတဲ့ - ရှရေညျစိမျ
ရှေhကငျြး(ငျ) - ခရစ်စတယျ
ပိရှီ - ဖရဲအူ
ရှီးhလြိုးရှီh - ဥဒေါငျ။ ဂျေါမိတျ
ပိုငျယှိ - ကြောကျစိမျးဖွူ
ခငျြး(ငျ)ယှိ - အပွာရောငျ ကြောကျနု
ကငျြးခြိ - ရှထေညျ
ယငျခြိ - ငှထေညျ
ယှိခြိ - ကြောကျစိမျးထညျ
ကူပိ - ရှေးဟောငျးဒင်ျဂါး
ရှေhစဲ့ - ကြောကျအရညျ
ဆိုင် အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
10:05 AM C-Word , Chinese
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တိုလီမိုလီရောင်းတဲ့ အိမ်ဆိုင်လေးတွေကအစ စူပါမားကက်တွေအထိ ဆိုင်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်။ တရုတ်လိုပြောချင်ရင် ဒါတွေ ဖတ်ထားနော်။
裁缝店 cái feng diàn
ဆိုင်ဖဲင်း(င်)တျန့် - အပ်ချုပ်ဆိုင်
服装店 fù zhuāng diàn
ဖုfကျွမ်းh(င်)တျန့် - အဝတ်အထည်ဆိုင်
布店 bù diàn
ပုတျန့် - အထည်ဆိုင်
果瓜店 guǒ guā diàn
ကော်ကွားတျန့် - သစ်သီးဆိုင်
钟表店 zhōng biǎo diàn
ကျုံးh(င်)ပြောင်တျန့် - နာရီဆိုင်
烟草店 yān cǎo diàn
ယန်းဆောင်တျန့် - ဆေးလိပ်ဆိုင်
槟榔包店 bīng láng bāo diàn
ပျင်း(င်)လန်(င်)ပေါင်းတျန့် - ကွမ်းယာဆိုင်
糕饼店 gāo bǐng diàn
ကောင်းပျင်(င်)တျန့် - မုန့်ဆိုင်
夫妻店 fū qī diàn
ဖူးfချီးတျန့် - အိမ်ဆိုင်
维修店 wéi xiū diàn
ဝေရှိုးတျန့် - service center
药店 yào diàn
ယောက်တျန့် - ဆေးဆိုင်
鞋店 xié diàn
ရှယ်တျန့် - ဖိနပ်ဆိုင်
便利店 biàn lì diàn
ပြန့်လိတျန့် - convenient store
免税店 miǎn shuì diàn
မြန်ရွှေ့hတျန့် - duty-free shop
干货店 gān huò diàn
ကန်းဟော့တျန့် - ကုန်ခြောက်ဆိုင်
五金店 wǔ jīn diàn
ဝူကျင်းတျန့် - ကုန်မာဆိုင်
杂货店 zá huò diàn
ဇာzဟော့တျန့် - ကုန်စုံဆိုင်
书店 shū diàn
ရှူးhတျန့် - စာအုပ်ဆိုင်
ဆိုငျ အမြိုးမြိုး အချေါအဝျေါမြား။
ကြှနျတျောတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ တိုလီမိုလီရောငျးတဲ့ အိမျဆိုငျလေးတှကေအစ စူပါမားကကျတှအေထိ ဆိုငျကွီးတှရှေိကွပါတယျ။ တရုတျလိုပွောခငျြရငျ ဒါတှေ ဖတျထားနျော။
ဆိုငျဖဲငျး(ငျ)တနျြ့ - အပျခြုပျဆိုငျ
ဖုfကြှမျးh(ငျ)တနျြ့ - အဝတျအထညျဆိုငျ
ပုတနျြ့ - အထညျဆိုငျ
ကျောကှားတနျြ့ - သဈသီးဆိုငျ
ကြုံးh(ငျ)ပွောငျတနျြ့ - နာရီဆိုငျ
ယနျးဆောငျတနျြ့ - ဆေးလိပျဆိုငျ
ပငျြး(ငျ)လနျ(ငျ)ပေါငျးတနျြ့ - ကှမျးယာဆိုငျ
ကောငျးပငျြ(ငျ)တနျြ့ - မုနျ့ဆိုငျ
ဖူးfခြီးတနျြ့ - အိမျဆိုငျ
ဝရှေိုးတနျြ့ - service center
ယောကျတနျြ့ - ဆေးဆိုငျ
ရှယျတနျြ့ - ဖိနပျဆိုငျ
ပွနျ့လိတနျြ့ - convenient store
မွနျရှေ့hတနျြ့ - duty-free shop
ကနျးဟော့တနျြ့ - ကုနျခွောကျဆိုငျ
ဝူကငျြးတနျြ့ - ကုနျမာဆိုငျ
ဇာzဟော့တနျြ့ - ကုနျစုံဆိုငျ
ရှူးhတနျြ့ - စာအုပျဆိုငျ
Posted by - Hla Khine Nu San
9:59 AM C-Word , Chinese
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတိုင်းမှာ တပ်မတော်တစ်ရပ် လိုအပ်ပါတယ်။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအဆင့်များကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
大元帅 dà yuán shuài
တာ့ယွမ်ရွှိုက်h - ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
元帅 yuán shuài
ယွမ်ရွှိုက်h - ထိပ်တန်းအရာရှိ
大将 dà jiàng
တာ့ကျန့်(င်) - ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
上将 shàng jiàng
ရှန့်h(င်)ကျန့်(င်) - ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
中将 zhōng jiàng
ကျုံးh(င်)ကျန့်(င်) - ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး
少将 shào jiàng
ရှောက်hကျန့်(င်) - ဗိုလ်ချုပ်
准将 zhǔn jiàng
ကျွင်hကျန့်(င်) - ဗိုလ်မှူးချုပ်
大校 dà xiào
တာ့ရှောက် - အထက်တန်းဗိုလ်မှူးကြီး
上校 shàng xiào
ရှန့်h(င်)ရှောက် - ဗိုလ်မှူးကြီး
中校 zhōng xiào
ကျုံးh(င်)ရှောက် - ဒုဗိုလ်မှူးကြီး
少校 shào xiào
ရှောက်hရှောက် - ဗိုလ်မှူး
上尉 shàng wèi
ရှန့်h(င်)ဝေ့ - ဗိုလ်ကြီး
中尉 zhōng wèi
ကျုံးh(င်)ဝေ့ - ဗိုလ်
少尉 shào wèi
ရှောက်hဝေ့ - ဒုဗိုလ်
准尉 zhǔn wèi
ကျွင်hဝေ့ - အရာခံဗိုလ်
军士 jūn shì
ကျွင်းရှစ်h - တပ်ကြပ်
士兵 shì bīn
ရှစ်hပျင်း - တပ်သား
နိုငျငံတျောကာကှယျရေးအတှကျ နိုငျငံတိုငျးမှာ တပျမတျောတဈရပျ လိုအပျပါတယျ။ စဈဘကျဆိုငျရာ ရာထူးအဆငျ့မြားကို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့။
တာ့ယှမျရှိုကျh - ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ
ယှမျရှိုကျh - ထိပျတနျးအရာရှိ
တာ့ကနျြ့(ငျ) - ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး
ရှနျ့h(ငျ)ကနျြ့(ငျ) - ဗိုလျခြုပျကွီး
ကြုံးh(ငျ)ကနျြ့(ငျ) - ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး
ရှောကျhကနျြ့(ငျ) - ဗိုလျခြုပျ
ကြှငျhကနျြ့(ငျ) - ဗိုလျမှူးခြုပျ
တာ့ရှောကျ - အထကျတနျးဗိုလျမှူးကွီး
ရှနျ့h(ငျ)ရှောကျ - ဗိုလျမှူးကွီး
ကြုံးh(ငျ)ရှောကျ - ဒုဗိုလျမှူးကွီး
ရှောကျhရှောကျ - ဗိုလျမှူး
ရှနျ့h(ငျ)ဝေ့ - ဗိုလျကွီး
ကြုံးh(ငျ)ဝေ့ - ဗိုလျ
ရှောကျhဝေ့ - ဒုဗိုလျ
ကြှငျhဝေ့ - အရာခံဗိုလျ
ကြှငျးရှဈh - တပျကွပျ
ရှဈhပငျြး - တပျသား
ဒီ post လေးထဲမှာ ဖော်ပြပေးမယ့် ဝေါဟာရတွေကတော့ 18+ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကား လေ့လာနေကြသူတွေအတွက် ဝေါဟာရပေါင်းစုံကို သိရှိနိုင်စေဖို့ ဖော်ြ...
တရုတ်နာမည် လှလှလေးတွေ မှည့်ကြမယ်။
ဘယ်လူမျိုးမှာမဆို နာမည်မှည့်ကြတဲ့အခါ အနက်အဓိပ္ပာယ် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ စကားလုံးတွေကိုသာ ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာလည်း ...
တရုတ်သိုင်းဇာတ်ကားများထဲမှ အထင်ကရရှိသည့် သိုင်းပညာများ။
တရုတ်သိုင်းဇာတ်ကားများထဲမှ အထင်ကရရှိသည့် သိုင်းပညာများ။ Credit - မှတ်စုကြမ်း ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်တုန်း တရုတ်သိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲများ...
ဂျပန်စာလေ့လာနေတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် Pdf စာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးတစ်အုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ စကားပြောကဏ္ဍတွေ အများကြီးပါဝင်ပြီး လေ့လာ...
ခင်မင်သူများအတွက် ဆုတောင်းစကားများ ။
Expressing Good Wish & Congratulations သူတပါးအတွက် ဆုတောင်းပေးတဲ့ စကားစုလေးတွေကို လေ့လာကြရအောင်။ ၁။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ Congratula...
▼ 2018 ( 545 )
သင် ဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ နေထိုင်ပါသလဲ။
အရက် အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
နာရီ အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
နေ့စဉ် ကုန်ကျစရိတ်တွေ လေ့လာကြပါစို့။
သင် ဖဲကစားရတာ ဝါသနာပါလား။
ရာဇ၀တ်မှုခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဝေါဟာရများ။
ဓာတုဗေဒ ဒြပ်စင် အခေါ်အဝေါ်များ။
ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရများ။
စာရွက်စာတမ်း အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
လေ့လာထားသင့်သော မသိမဖြစ် ကြိယာများ။
ဆိုင် - တရုတ်လို ဘယ်နှစ်မျိုး ပြောလို့ရလဲ။
Apple နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရများ။
iPhone နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဝေါဟာရများ။
ငွေဖြည့်ကတ် - တရုတ်လို ပြောလဲ။
泔水 ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ။
ဂျင်းထည့်ခံရပြီ - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား။
စောစောအိပ်လို့၊ စောစောထလို့၊ စောစော ???
အုန်းသီး ဆန်ချည်ထွေး - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
ဦးရှင်ကြီး - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောသလဲ။
ဓနိရည် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
မြန်မာ့ အလေးချိန် သတ်မှတ်ပုံများ။
ကန်တော့ဆွမ်းပါဘုရား - တရုတ်လို ပြောကြည့်အုံး။
ကာလီ မယ်တော် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
မုန့်ပဲ သွားရည်စာ အမျိုးမျိုး။
အာလူး - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
လက်သည်းနီ - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
စစ်သင်္ချိုင်း - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
ဖုန်း ဘက်ထရီ ကုန်နေပြီ။
မျက်မှန် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
တိုက်ကြက် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
တုတ်တုတ်ကား - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
မမ ဝဝ - ကဗျာလေး ဖတ်ကြမယ်။
မုန့်လင်မယား - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
အဝေးပြေးကားဂိတ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
ကဒ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
ဘော်လုံးပွဲ - ဝေါဟာရများ။
ရေညှိထမင်းလိပ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
ထမင်း နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရများ။
► 2016 ( 1180 )